Jụọ onye Chiropractor | Ọkachamara ọkachamara na - enyere aka na akwara na akwara
AKW ANKWỌ ọkwa (Chọọ ụlọ ọgwụ)
FibromyalgiaIhe ederede banyere Fibromyalgia Fibromyalgia bụ ọrịa na-adịghị ala ala nke na-enyekarị ihe ndabere maka ọtụtụ mgbaàmà dị iche iche na akara ngosi ahụike. N'ebe a, ị nwere ike ịgụkwu banyere isiokwu dị iche iche anyị dere banyere ọrịa mgbu na-adịghị ala ala fibromyalgia - ọ bụghịkwa ụdị ọgwụgwọ na usoro onwe onye dị maka nyocha a. Fibromyalgia makwaara dị ka anụ ahụ dị nro rheumatism. Ọnọdụ ahụ nwere ike ibute mgbaàmà dịka ụfụ na-adịghị ala ala na akwara na nkwonkwo, ike ọgwụgwụ na ịda mba.
Nri na nriNwere mmasị na nri nri na ahụike gị? N'ebe a, ị ga - ahụ isiokwu na nri ụdị. Site na nri anyi tinyere ihe ndi eji eme nri, ogwu, nkpuru osisi, ihe onunu na ihe ndi ozo.
Mmega Ahụ na Mmega Ahụ
Jụọ onye chiropractor
<< JKỌ - ZARA!
Jụọ onye chiropractor (n'efu, ndụmọdụ adịghị mkpa ọ bụla!)
Nsogbu na nkwonkwo siri ike, akwara na mgbu? N'ebe a, ị nwere ike ịjụ chiropractor ajụjụ banyere nsogbu ahụ mgbu. Nwere ike ịhọrọ ịbụ onye a na-akpọghị aha na ọrụ ndụmọdụ a. Ndị anyị na ha jikọrọ aka na chiropractors na-enye ndụmọdụ, ndụmọdụ, mmega ahụ na usoro ndị emere maka nsogbu gị ozugbo - anyị na-enye aka n'inweta gị na ndị dọkịta nọ na mpaghara gị. Kekọrịta nke a na onye chọrọ ntakịrị enyemaka ma ọ bụ nkwalite n'ọgụ maka ndụ na-enweghị ihe mgbu kwa ụbọchị.
Nke a bụ otu esi ajụ ajụjụ gị
I Comments Box na peeji a. Pịgharịa gaa na ibe weebụ ruo mgbe ị hụrụ mpaghara nkọwa - wee tinye aha gị (na-enweghị aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ - ọ bụrụ na ị na-eji ezigbo aha a ga-edebiri aha mbụ + leta mbụ nke aha ikpeazụ gị maka ihe gbasara onwe gị) wee nyefee ajụjụ gị. Ihe kariri ị dee - chee na ọ dị mkpa - ọ dịịrị ndị ụlọ ọgwụ anyị mfe ịza ajụjụ gị n'ụzọ dị mma.
Via ozi nkeonwe na Peeji Facebook anyị (Vondt.net - Ozi banyere ahụ ike)
Chiropractor Alexander Andorff
Alexander nwere ogo mmụta na chiropractic ma rụọ ọrụ dị ka chiropractor kemgbe 2011 - ọ na-arụ ọrụ na Kiropraktorhuset Elverum. O nwere ikike zuru oke n'ihe gbasara nsogbu dị n'ime nsogbu ahụ mgbu - ma nwee nnukwu ihe akaebe dabere na onye ọrịa ahụ na-anata ndụmọdụ / omume / ọzụzụ ọzụzụ / mmezigharị ergonomic nke na-enye ha ohere inweta ogo nke nsogbu ha ogologo oge. gbochie ihe mgbu ị na-eme ọzọ. Ọ na-ebi ndụ site na ụkpụrụ bụ na 'mmega ahụ bụ ọgwụ kachasị mma' ma na-agba mbọ ịgba ume ka ị na-emegharị ahụ kwa ụbọchị site na ọrụ kwa ụbọchị dị ka njem na ịgafe obodo, mana ọ makwaara na ọ nwere ike ịbụ usoro sara mbara iji si n'olulu mgbu pụọ ozugbo ị kwụsịrị ebe ahụ. . Yabụ, ndụmọdụ, omume na usoro a na-emegharịkwa maka onye ọ bụla.
"Aghọtara m na nsogbu akwara anụ ahụ na -abụkarị ngwakọta nke ọtụtụ ihe - dịka ọmụmaatụ. mmachi nkwonkwo (nkwonkwo siri ike), myalgias (overactive, adịghị ike, akwara na -adịghị arụ ọrụ), ahaghị nhata akwara (akwara siri ike n'ebe ụfọdụ na adịghị arụ ọrụ ebe ọzọ), ọnọdụ ọrụ dysergonomic (oche oche adịghị mma jikọtara ya na ịnọ ọdụ nke ukwuu nwere ike bute ọnya. azụ) na usoro ngagharị na -ezighi ezi (ịga ije nwere ike ịrịa ọrịa gị). Kpọmkwem maka nke a, ọ dị mkpa na mgbado anya bụ maka ebumnuche ime ka ị ka mma na ọkwa niile. Achọpụtala m ịza ajụjụ ebe a na Vondt.net iji mesie ọhụụ m ike maka nke a - yana inye aka mebie akụkọ ifo na onye chiropractor 'na -agbaji' - nweere onwe gị ịjụ ajụjụ n'okpuru aha njirimara na -enweghị aha ma ọ bụ site na aha mbụ. Na -atụ anya ime ike m niile iji nyere gị aka n'ụzọ nke ndụ ka mma. " - Alexander
- Mee ihe banyere ihe mgbu! Mee ka ụlọọgwụ nyochaa ha.
Ekwela ka ihe mgbu bụrụ akụkụ nke ndụ gị kwa ụbọchị. N'agbanyeghi onodu gi, ma obu site na oru aru aru ike site na nwata ma obu otutu oghachu oru, obu na azu na aru gi nwere ike inweta oru oma karia ka odi na ugbua PR. Nkwado mbụ anyị maka ihe mgbu bụ ịchọ otu n'ime ndị ọrụ atọ a ka enyere ikike n'ihu ọha site n'aka ndị ọrụ ahụike.
Kedu ihe kpatara Vondt.net jiri lekwasị anya na ndị ọrụ atọ nke usoro ọgwụgwọ anụ ahụ, usoro ọgwụgwọ na chiropractic?
Ikike ikike ahụike ọha bụ nsonaazụ nke ndị nwe obodo maka agụmakwụkwọ zuru oke ha, ọ bụụrụ gị nchekwa dị ka onye ọrịa ma tinyekwa ya, gụnyere ihe ndị ọzọ, ọtụtụ uru pụrụ iche - dịka nchekwa site na Ngwọta Ahụike Ndị Ọrịa na Norway (NPE). Ọ bụ nchekwa ebumpụta ụwa ịmara na e debara aha ndị ọrụ nọ na atụmatụ a maka ndị ọrịa - na, dị ka ekwuru, anyị na-akwado ka ị nyochaa / na-emeso ndị otu nọ na atụmatụ a metụtara. Anyị na-eme nke a dị ka nchekwa maka ndị anyị na-akpọtụrụ site na ọrụ ndụmọdụ anyị, mana nke ahụ apụtaghị ileda ndị otu aka ọrụ na-adaghị na ndepụta nke aha a. E nwere ọtụtụ ndị ụlọọgwụ maara nka nọ. Ezigbo ụlọ ọgwụ ga-elekwasị anya na iwepụ ihe ọ na-abụghị tupu iwekọta nyocha na atụmatụ ọgwụgwọ ọhụụ.
Otu aka oru abuo mbu (chiropractor na onye na - aru ​​oru ogwu) nwekwara ikike nnabata (ka o gosiputa ihe nlere dika X-ray, MRI na CT - ma obu ikwughachi ya na onye rheumatologist or neurologist mgbe achoro nyocha a) na ezumike oria (nwere ike kporo ezumike ma oburu na odi nkpa). Isi okwu maka ahụ ike dị mma na-emetụta nrụgide kwesịrị ekwesị na ndụ kwa ụbọchị (ergonomic fit), n'ozuzu mmegharị na ịdịkarịghị ọdụ, yana mgbakwunye na mmega ahụ oge niile.
N'okpuru bụ igbe okwu anyị chọrọ ka ị jiri maka ajụjụ ọ bụla
Topicsfọdụ isiokwu ndị a na-agakarị, bụ ajụjụ ndị a na-ajụkarị:
- Ọrịa ogbu na nkwonkwo (ogbu na nkwonkwo)
- Ọrịa osteoarthritis (osteoarthritis)
- Painkwụ mgbu
- Ọrịa Crystal / BPPV
- Shockwave Agwọ
Vondt.net ekwu, sị:
Jiri mpaghara nkọwa a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịza ajụjụ n'isiokwu a ma ọ bụ nwee ajụjụ
Nwee ọmarịcha ụbọchị ka!
Marita ekwu, sị:
Nnọọ. Ịgba mgba na nkwonkwo mkpịsị aka na-eche ihe ọ nwere ike ịbụ. Bụ isi mkpịsị aka, mkpịsị aka ndeksi, mkpịsị aka etiti na ọkara mgbanaka n'akụkụ abụọ. Njikọ aka na-egbu mgbu ma na-akpọchikarị ya. Malite na mpaghara tupu nkwụ (ebe elekere dị). Ugbu a na-agbago ruo n'ikpere aka kacha njọ. Umengwụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na m anọdụ ala ma ọ bụ dinara ala. Dọkịta na-ekwu na ọ bụ fibro m, ma ihe mgbu ruo mgbe ọ na-akpali, enwere m nke a mgbe niile maka ọnwa 3 ugbu a… Ọ na-esiri m ike mgbe m tụfuru ihe mkpịsị aka na-eme ọtụtụ ihe ha chọrọ… M ga-achọpụta na ọ bụ fibro. nke a kwa, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ ihe ọzọ?
Chiropractor Alexander Andorff (MNKF) ekwu, sị:
Mgbu na mkpịsị aka ukwu, mkpịsị aka ndeksi, mkpịsị aka etiti na ọkara mkpịsị aka mgbanaka bụ akara njirimara Carpal Ọwara ọrịa (ya bu nchikota akwara etiti n'ime nkwojiaka).
Ọ nwekwara ike na-apụta mgbe ụfọdụ dị ka mgbu n'ikpere aka - yana na ị na-enweta ike njide dị ntakịrị n'ihi enweghị 'ike' site na akwara. Ka oge na-aga, nke a nwekwara ike iduga n'ịla n'iyi n'afọ iri na ụma (nke nwere ike ịdị ka 'mikpu' miri emi n'ọbụ aka na isi mkpịsị aka).
M ga-akwado ka enyocha gị maka ọrịa ọwara carpal.
Chiropractor nyere ikike, MNKF - Chiropractor House Elverum
N Hovda ekwu, sị:
Njikọ akwara n'okpuru ụkwụ. Ịgba mgba na eriri anụ ahụ dị na njiko nke ụkwụ. Ọ dị ntakịrị jụụ nke siri ike, dị nro ma na-ewute m mgbe m na-eje ije na ọdụ. Ọ na-akawanye njọ ka m na-agbaji ụkwụ m. Gbalịa ịhịa aka n'ahụ yana tụgharịa ụkwụ n'elu obere ụfụfụ maka naanị mgbake dị mkpirikpi. (Dọkịta na-ekwu na ọ dịghị ihe ọ bụla ọgwụ na-eme, ma ọ nwere ike ịnwale chiropractor). Enwere ọgwụgwọ ọ bụla?
Daalụ maka ajụjụ a. Azịza ya bụ na nke a dị ka ị ga-achọ ntakịrị ozi tupu ị kwuo kpọmkwem ihe ekwesịrị ime ebe a.
1) Ihe mgbu ahụ ọ dịkwa n'ikiri ụkwụ ma ọ bụ n'ihu ikiri ụkwụ - ma ọ bụ ị ga-ekwu na ihe mgbu ahụ bụ nanị n'ebe dị n'akụkụ ebe dị n'azụ ụkwụ?
2) Kedu mgbe mgbu ahụ mere na ogologo oge ole ka ọ dị? Ha bụ naanị otu ụkwụ ma ọ bụ na ị na-enwekwa mgbu na nke ọzọ?
3) Ọ na-afụ ụfụ ịzọ ụkwụ gị n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbe ịnọ jụụ?
4) Banyere ọgwụgwọ, enwere ọtụtụ usoro, mana ndị a ga-adabere na nyocha nyocha nke ụlọ ọgwụ na enwere ike ime. Dịka ọmụmaatụ, usoro ọgwụgwọ nrụgide nrụgide nwere mmetụta dị mma edere megide fasciitis osisi - nke bụ ihe na-akpatakarị mgbaàmà ndị ị kwuru n'elu. A ga-ejikọta nke a na mmega ahụ n'ụlọ, mkpokọta nkwonkwo na ọgwụgwọ ebe nrụgide.
5) Esela foto ma ọ bụ nyocha ndị ọzọ nke ụkwụ?
Nchọpụta dị iche iche n'oge a gụnyere plantar fasciitis, myalgia na ọbụ ụkwụ (na / ma ọ bụ nwa ehi) / mgbochi nkwonkwo na obere nkwonkwo ụkwụ.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgụta azịza gị dịka ajụjụ ndị dị n'elu.
Alexander Andorff - Chiropractor (MNKF)
Stian H ekwu, sị:
Ndewo .. agaala chiro- na physio- due. nnukwu isi ike na akụkụ thoracic na lumbar, fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpochapụ ọrịa ahụ mgbe ihe dị ka ọgwụgwọ 14 gasịrị, ọ kwụsịrị ugbu a, ma na azụ azụ malitere inwe mmiri / tickling / stings na ogwe aka na ala isi mkpịsị aka. Mgbe ụfọdụ na-enwekwa mgbu / nrụgide na ogwe aka. M ga-achọ ọgwụgwọ ọzọ ka ọ bụ ihe ga-ebelata ka oge na-aga?
Alexander Andorff - Chiropractor (MNKF) ekwu, sị:
Daalụ maka ajụjụ gị.
Site na obere ozi, ọ na-esiri m ike ikwu ma nke a ọ ga-ebelata ma ọ bụ na ọ gaghị.
Ihe nwere ike ikwu bụ na mmiri iyi / radieshon / tingling na-agbada na ogwe aka wee pụta na isi mkpịsị aka bụ n'ihi nrụgide ma ọ bụ mgbakasị ahụ nke akwara etiti - akwara a na-esi na brachial plexus na-abanye n'ime ogwe aka ebe ọ na-eme ka ahụ dịkwuo elu. mọzụlụ dị n'ime aka.
Ihe ato kacha eme ka akpakpo akwara sikwuo ike:
1) Ọrịa ọgbụgba ọwara carpal - Mgbu na mkpịsị aka, mkpịsị aka mkpịsị aka, mkpịsị aka etiti na ọkara mgbanaka mgbanaka bụ akara njirimara nke ọrịa ọwara carpal. Ọ nwekwara ike na-apụta mgbe ụfọdụ dị ka mgbu n'ikpere aka - yana na ị na-enweta ike njide dị ntakịrị n'ihi enweghị 'ike' site na akwara.
2) Pronator Teres Syndrome - Mkpokọta akwara dị na mbido.
3) Mwepu nke irighiri akwara na olu / thoracic outlet - nke nwere ike ịbụ ihe ndabere maka TOS (thoracic outlet syndrome). Nke a bụ n'ihi nsị akwara ndị dị na nkwonkwo akwara. Ọ bụ akwara scalenii nwere ezighi ezi nke nwere ike ibute ọnọdụ a, oge a na-ejikọ ya na dysfunction nke ọgịrịga nke mbụ na akụkụ nke thoracic columna.
Onwe m, m ga - akwado nyocha nyocha nke nsogbu gị - ka ị wee nweta mgbatị ahụ / ọzụzụ ọzụzụ ziri ezi ma nwee nzube maka mmelite ogologo oge nsogbu ahụ.
Stian Henriksen ekwu, sị:
Ndewo ọzọ, m na-enwekarị ahụ mgbakasị ahụ ma nwee ọtụtụ eriri na mpaghara ubu, echere m na ọrịa m na mmiri iyi / radieshon / na-agbada ogwe aka nwere ike ịbụ n'ihi nke a - yabụ echere m na m ga-akawanye mma na ọzụzụ. / omume dị ka i dere na a gara aga thread .. ma n'elu a ubé dị iche iche okwu: M wee gafee otu mgbasa ozi si a ụlọ ọrụ na-ere "àgwà correcting" uwe .. anodyne dot mba .. nwere ihe ọ bụla jide na nke a ka ọ bụ na ọ bụ ya. ezi na ngwọta kacha mma ịga maka ọgwụgwọ na physio?
Ee, ihe ngwọta kachasị mma na ọtụtụ ndị otu n'ihe banyere ihe àmà bụ ọzụzụ / mmega ahụ na-ejikọta na ntụrụndụ, mmemme na-arụ ọrụ iji zere ibu otu akụkụ, yana ọgwụgwọ anụ ahụ mgbe ọ dị mkpa. E nwere ọtụtụ ndị na-agbalị ịkpata akụ na ụba na ihe a na-akpọ chepụtara na-amasị "ngwa ngwa idozi" ngwọta - ma ọ dị mwute ikwu na-enweghị ọtụtụ nkwado na nnyocha ma ọ bụ ọmụmụ ndị e mere na ubi.
Banyere nguzozi, ị ka nwere ike nweta ihe mgbu site n'ịnọ ọdụ kwụ ọtọ n'oche - ọ bụ mgbe ahụ ibu otu akụkụ ga-akpata mgbu. "Nke na-esote bụ nke kacha mma" bụ okwu dị mma mgbe ọ na-abịa ibu (dịka ọmụmaatụ oche oche), n'ihi na nke a ga-eduga na ibu dị iche iche na mọzụlụ na nkwonkwo - nke pụtara na ọ dịghị onye ọ bụla ebe ibu ibu ibu na mgbu mmetụta.
Adanlodu Ole ekwu, sị:
Ndewo, a chọpụtara m ọrịa Bertollotti ma m rụọ ọrụ ugboro abụọ maka nke a. A gwala gị na nke a bụ njehie a na-arịa ọrịa na ọrịa na-adịghị ahụkebe. Anaghị m agbake, ma njọ. Echere na m ga-emerụ onwe m ihe dịka 2% mgbe afọ iri atọ nke ọrụ ga - arụ ọrụ nke aka m. Nwere ihe mgbu oge niile. Agbalịwo ọtụtụ ihe. Naanị otu ihe na-enyere m aka bụ ije ije ma na-ekpo ọkụ.
Ọ dị nwute na ịnụ na nsogbu a na-emetụta gị.
Ọrịa Bertolloti bụ ihe na-adịghị ahụkebe, ọnọdụ ọmụmụ - nke na-adịkarịghị aghọ ihe mgbaàmà ruo na njedebe nke 20s ma ọ bụ mmalite nke 30s. N'ikwu ya ntakịrị, n'ọnọdụ a, vertebrae ala (L5) ga-eji nwayọọ nwayọọ 'jikọta' na akụkụ elu nke sacrum (S1). Njikọ a n'etiti nkwonkwo abụọ a na-eduga ná mgbanwe na biomechanics na otú ị na-ebu azụ azụ, dị ka L5 intervertebral diski na nkwonkwo agaghịzi arụ ọrụ nke ọma dị ka ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ na nkwado beam n'okpuru ibu.
Nke a na - ebute mgbanwe na mmegharị gị na ọzọ intervertebral diski na - enweta ibu - ya bụ L4 (vertebra nke anọ nke ala). Ka oge na-aga, a hụla na diski diski a (ọ kachasị ọsọ karịa nke nkịtị) ruo mgbe ọrịa diski ma ọ bụ diski prolapse pụtara na diski a, nke na-etinye mgbanye na mgbọrọgwụ akwara L5. Nrụgide a na - emegide akwara akwara na-enye ihe ndabere maka mgbaàmà ọrịa / ọrịa sciatica na radieshon na ala ma ọ bụ ụkwụ abụọ.
Usoro ịwa ahụ, inje na mgbochi mgbochi bụ ụzọ ọgwụgwọ kachasị mma maka nsogbu a. Ma ọ bụghị ya, ịkwado ọzụzụ na ọgwụgwọ anụ ahụ na onye na-ahụ maka anụ ahụ na mgbakwunye arụ ọrụ ọha, dị ka nke a bụ nsogbu na-adịghị ala ala nke ị ga-enweghị ihe nwute ị ga-ebi maka ndụ gị niile.
Kristin Aa ekwu, sị:
Mgbe ụfọdụ, na-enwe mmetụta na-ere ọkụ / na-agba agba n'akụkụ elu nke ụkwụ elu megide nwa ehi na ntakịrị n'èzí nke nkwonkwo ụkwụ mgbe m na-eje ije. Ọ na-ewute m nke ukwuu nke na m ga-akwụsị weliri ụkwụ m.
Oria gi bu ezigbo agwa ukwu splints.
Iribiga ókè ma ọ bụ ịrụ ọrụ nke ọma nwere ike ibute mmeghachi anụ ahụ na anụ ahụ, nke na-emepụtaghachi ihe mgbu mgbe ị na-etinye nrụgide n'ụkwụ / nkwonkwo ụkwụ. Mgbuji na-emetakarị ndị na-eme egwuregwu, mana ọnọdụ ahụ na-emetụtakwa ndị na-adịkarị mma na ọzụzụ ma ghara inye onwe ha ezumike zuru ezu ma ọ bụ gbakee n'etiti arụ ọrụ. Mmebi dị n'ụkwụ, dịka ịghafe oke ma ọ bụ ida mkpọ aka nke ụkwụ ahụ, nwere ike ime ka ị nwee osteoporosis. Loaddị oke ibu ahụ nwere ike ime mgbe ibu ọrụ nrụpụta gafere ihe ọgwụgwọ nkịtị na nrụzi anụ ahụ.
A na-agwọ ọrịa na-egbu egbu nke osteomyelitis na izu ike, ice, ịhịa aka n'ahụ, mgbatị ahụ ike na mgbatị ahụ. Mana mmadụ kwesịkwara ịtụle usoro ije na ịgba ọsọ iji chọpụta akwara na nkwonkwo na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na-ebute ibu ibu. Ọ bụrụ na ị na-enwe osteomyelitis ugboro ugboro, ọ dị mma ịhụ dọkịta maka nyocha - ka onye a wee chọpụta ihe kpatara ị na-enwe nsogbu a ugboro ugboro.
Mona K. ekwu, sị:
N'izu gara aga enwere m nnukwu mgbu nke malitere na azụ azụ m. Ọ na-anọdụ ugbu a na-anọkarị n'oche, ọkachasị n'ọkpụkpụ ọdụ. Ihe mgbu na-apụta mgbe ụfọdụ n'apata ụkwụ na mpaghara hip. Ọ na-akacha egbu mgbu ịnọdụ ala, yana hulatakwa n'isi iyiri akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ihe ọzọ, dịka ọmụmaatụ. Ihe mgbu ahụ mere n'enweghị ihe ọ bụla doro anya na-akpalite, ọ dịghị mgbagwoju anya na mberede ma ọ bụ ibuli elu. Nwere otu ihe mgbu na October 2016, ma ọ gafere na-enweghị ọgwụgwọ. Naanị izu ike na voltarol. N'oge a, ọ naghị enyere aka na voltarol na paracetamol. Maka ozi, a chọpụtala m na m nwere scoliosis n'oge, mana ọ ruru ogo "dị nro". Enweela ọpụpụ pelvic n'ime afọ ime ikpeazụ afọ 9 gara aga. Afọ 2 gara aga enwere m ọdịda ozugbo n'akụkụ nkume nke kụrụ ọkpụkpụ ọdụ m. Ọ na-afụ ụfụ nke ukwuu maka ụbọchị 2-3, mana ọ gawara. Ma ọ bụghị ya, enwere m oke ibu, mana na ọdịdị anụ ahụ dị mma ma na-emega ahụ 2-3 ụbọchị n'izu. Ọtụtụ na-agba egwu dị ka zumba, mana kwa ike. Ọ na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara, ma nwee ụfọdụ ebuli n'ọrụ m. Kedu ihe ị chere bụ ihe kpatara mgbu a?
Enwere ike ịkpata mgbu azụ dị ala site na ọtụtụ ihe kpatara ya ma na-emekarị ọtụtụ ihe na nhazi. Ka anyị chịkọta ụfọdụ n'ime ihe anyị maara:
1) A na-etinye ihe mgbu ahụ na akụkụ ala nke azụ azụ, oche (yana ọdụ ọdụ) na mgbe ụfọdụ ruo n'apata ụkwụ na mpaghara hip.
2) Ihe mgbu na-akpalite site na ịnọdụ ala (mkpakọ) na ọnọdụ ndị na-agbanwe agbanwe.
3) Ọgwụ mgbu enwechaghị mmetụta.
Nchọpụta mbụ m dị iche iche bụ megide dysfunction na nkwonkwo na mọzụlụ na mgbanwe lumbosacral (ebe azụ azụ na-ezute sacrum), jikọtara ya na myalgias na-adịghị ike na nke siri ike na buttocks na hips. Karịsịa piriformis (mara na-akpata mgbu n'ebe coccyx) na gluteus medius / minimus bụ akwara atọ nwere ike itinye aka na nsogbu gị. Ọzọkwa, enwere ike itinye aka na arụrụ arụ ọrụ na nkwonkwo pelvic n'otu akụkụ - ihe na-emekarị yana ọrịa piriformis / nsogbu. Dabere n'eziokwu na ọ na-akawanye njọ na mkpakọ na mgbanwe (na-ehulata n'ihu), anyị apụghịkwa ịpụ na e nwere akwara ma ọ bụ diski mgbakasị na foto ụlọ ọgwụ.
Nyere na ị nwebeghị mmetụta nke ọgwụ mgbu na izu ike, m ga-akwado ka ị kpọtụrụ onye dọkịta nyere ikike n'ihu ọha (chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka) dị gị nso maka nyocha nke foto mgbu gị. Ha ga-enwekwa ike ịnye gị mmega ahụ na ntuziaka ọzụzụ ahaziri maka gị.
Daalụ maka azịza gị. Mgbe ahụ, ọ ga-abụ ịkwado onye chiropractor na Mọnde. Daalụ, Mona
Jisie na mgbake dị mma, Mona.
Enwere onwe gị ịkpọtụrụ m ọzọ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ oge ọzọ.
Marie ekwu, sị:
Enweela ọrịa kristal ma ugbu a olu, olu, agba na azụ azụ adịla egwu kpamkpam ma emesịa na-alụ ọgụ na isi ọwụwa, isi ọwụwa na ahụ mgbu.
Kedu ihe m ga-eme maka nke a? Chee na enweghị m kristal n'ihi na ọ dị iche ugbu a, physio gwara m na enweghị m kristal, mana adịghị m mma na ahụike dịka m dị na mbụ.
Alexander Andorff (Chiropractor - MNKF) ekwu, sị:
Ọ bụrụ na a zụrụ onye dọkịta na ya, ị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa kristal / benign positional dizziness. Ọ bụrụ na ule ndị a adịghị mma, ọ na-egosi na dizziness nwere ike ịbụ n'ihi arụ ọrụ na akwara na nkwonkwo - otu n'ime ihe ndị na-akpata dizziness. Ihe metụtara olu (cervicogenic) dizziness na-ejikọta ya na isi ọwụwa.
Egosiputa ọgwụgwọ ntuziaka nke nkwonkwo na akwara iji nwee mmetụta na mbenata mgbaàmà n'ihi cervicogenic dizziness (Reid et al, 2005).
Na-atụ aro ka ị na-ekwu okwu adịghị arụ ọrụ n'olu site na mgbatị / ọzụzụ na ọgwụgwọ ọkachamara nke nkwonkwo na mọzụlụ.
Alexander (Chiropractor - MNKF)
Anita Lie ekwu, sị:
Na-eche ma ị nwere ike biko nyere m aka ịkọwa azịza MRI?
Maka ozi, a chọpụtala m na m nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo n'ụkwụ ukwu aka ekpe, werekwa m ihe nkwado were waa m ahụ.
MRI pelvis na hips:
Enweghị iv. iche. X-ray pelvis nwere hips site na Machị 14, 2017 maka ntụnyere.
Ihe mgbaàmà nkịtị sitere na ụmị ọkpụkpụ. Enweghị ihe ịrịba ama nke mgbaji ma ọ bụ mbibi. Mgbanwe mmebi na nkwonkwo IS na symphysis. Enwere mgbanwe mmebi nke mmalite na nkwonkwo hip. Enweghị hydrops, corpus liberum ma ọ bụ synovitis n'akụkụ ọ bụla. Enweghị coxarthrosis emebere. Enweghị ihe akaebe nke mmerụ ahụ labrum. N'èzí trochanter isi mpaghara n'akụkụ abụọ, a na-ahụ mgbama dị elu nke nwere uche na usoro nha nha nke mmiri dakọtara na edema anụ ahụ dị nro. Atụgharịrị dị ka trochanteritis bilateral dị nro, nke a na-akpọkarị n'akụkụ aka nri. A na-ahụta tendinosis dị nro na m. Gluteus minimus na akwara medius n'akụkụ abụọ. Enweghị bursitis. Mgbakwụnye hamstring nkịtị na eriri buttock. Ọ dịghị ihe ị ga-ahụ na mgbidi dị n'azụ afọ. Nchọpụta na-adịghị ahụkebe na ukwu. Mgbama nkịtị sitere na mọzụlụ. Enweghị ihe akaebe maka nsogbu impingement ischiofemoral. Enweghị mmiri mmiri efu na obere pelvis.
R: tendinitis trochanter dị nro n'akụkụ abụọ, na-akpọpụta ntakịrị karịa n'akụkụ aka nri. Nyefee ederede.
Azala m ajụjụ gị na ngalaba nkọwa n'okpuru'Nnyocha MRI'(pịa ebe a ka ịgụ ya).
Mariann Fjelde ekwu, sị:
M na-enwe nnukwu mgbu n'olu na ubu ma na-enwe mgbu mgbu n'azụ m kwa ụbọchị. Ana m agba mgba nke ukwuu na akụkụ aka nri nke pelvis. Nke a na-afụ ụfụ nke ukwuu mgbe ị na-agagharị. Ọtụtụ mgbe na-eteta n'abalị ebe aka na ụkwụ na-efunahụ mmetụta na m ga-ama jijiji ka ha nwetaghachi mmetụta ahụ n'ebe ahụ. Na-alụ ọgụ nke ukwuu na mgbu na nkwojiaka na mkpịsị aka na oyi, mgbe ahụ, m na-atụfu ọbara ọkọnọ si n'ebe. Enwekwara nsogbu ebe m na-ejide ihe na-efunahụ nke a n'aka m. Ọzọkwa nwere ikpere n'akụkụ aka nri nke na-akpọchi ma na-eme ịpị ụda nke na-ewutekwa ọtụtụ mmegharị ahụ. Ụkwụ m n'akụkụ aka nri na-adakwa naanị mgbe ụfọdụ na ụkwụ nwere ike ịgbagọ nke ọma na m dara n'ala site na ugboro abụọ a n'ọnọdụ guzoro ọtọ. Mvh Mariann
Ọtụtụ ihe na-eme ebe a. Dabere n'ihe ị na-ede, enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya. Akwadoro nke ukwuu ka ị kpọtụrụ ọgwụgwọ maara ihe iji nyochaa nsogbu gị. Ọ dị ka ịchọrọ enyemaka (ma ọgwụgwọ yana ọzụzụ) na nke a ebe a.
Janne lohne ekwu, sị:
Nnọọ. E ji ụgbọ ala kụgbuo m n’azụ n’afọ 1996. Adị m ime mgbe ahụ n’amaghị ya. Mgbe ahụ isiike site n'úkwù ruo n'olu. Ha kwuru na ọ bụ naanị ngwọta pelvic - wee kpochie - ya mere muscular. Na 2012, ha chọpụtara mgbe ọtụtụ azụ na azụ na enwere m mgbaji na L5-S1 ruo ọtụtụ afọ. N'afọ 2012, e ji efere na skru kwachie ya n'otu mpaghara ahụ. Afọ 2 ka e mesịrị, e nwere nnọọ ihe mgbu ma ya mere ha wepụrụ ha ọzọ - efere na kposara.
Ugbu a, m na-aga ọzụzụ mmiri na physio x 1 kwa izu, akwụkwọ ntuziaka physiotherapy xi izu na ọzụzụ onwe onye na mmemme sitere na physio 1-2 ugboro kwa izu + Ụlọ ọgwụ mgbu 1 oge kwa ọnwa ma nweta ihe mgbu.
Ihe niile m na-eme na-arụ ọrụ naanị n'ime ụbọchị 2 kacha elu. Na-arụ ọrụ na 80% ọnọdụ. Nsogbu bụ na m na-enwe mgbu mgbe niile .. mgbe azụ m na-agwụ ike, enweghị m ike ibuli ụkwụ aka nri m ma ọlị. Ọ dịghị onye na-aghọta nke ọ bụla.
Enwere m isi ike nke ukwuu ma na-enwe mgbu na azụ azụ ma na-egbukepụ n'akụkụ aka nri ma n'ihu, n'azụ na n'ihu na ukwu na mgbatị hip n'akụkụ aka nri. Ị nwere ike ị nyere m aka?
Ndewo, na-agakwuru chiropractor ugboro atọ maka olu ọnya na kemgbe ahụ enweela ihe mgbu dị ukwuu na ọgịrịga, dị n'okpuru ara. Nke a na-agwụ ike ma na-egbu mgbu. Ga-abụ nke gị ọzọ ka Ista gachara. M ga-aga n'ihu ma ọ bụ kwụsị ebe ahụ? Ahụtụbeghị m mgbu ebe ahụ. Ọ na-esi n'aka nri gaa n'aka ekpe. Kedu ihe m na-eme?
Ọ dị ka iju. Iju nakwa ka ọgịrịga gị si aga site n'akụkụ gaa n'akụkụ - nke a na-enye ihe mere ị ga-eji kwere na ọ nwere ike ịbụ muscular.
Ọ na-afụ ụfụ mgbe ị na-ekuku ume ma ọ bụ na-atụgharị ahụ gị elu n'akụkụ?
Nwere ike ikwu na ị na-akpọ gị chiropractor echi na-agwa ya / ya banyere nke a erughị ala nke gị. Ọ nwere ike ịbara gị uru itinyekwu oge n'ilekwasị anya na mọzụlụ intercostal na akwara dị n'ime ubu na nyocha ọzọ.
Alexander (Chiropractor, MNKF)
Bente Heia ekwu, sị:
Nnọọ. Ogologo oge gara aga enwere m mgbu n'úkwù aka nri m. Mgbu mgbu na-adị ka eriri gburugburu afọ. Na-enwetakwa mgbu mgbe ị na-eje ije n'akụkụ ahụ. Ọ bụrụ na m guzoro ogologo ogologo gbagoo na ala, ọ na-esiri m ike ịga ije ma ọ bụ gbadaa. Kedu ihe nke a nwere ike ịbụ?
Ọ ga-amasị m inyere gị aka ịchọpụta.
1) Ị dee na ọ dịla otu a ogologo oge - ogologo oge ole ka ọ bụ?
2) Ihe mgbu ahụ na-agba agba ma nwee ike ịga n'ihu afọ - ị pụtara na ha na-egbukepụ site na hip na n'afọ, yana ukwu?
3) Ihe mgbu ahụ dịkwa njọ mgbe ị na-eje ije na nnukwu ibu static?
4) Enwerela nyocha onyonyo nyocha nke hip na / ma ọ bụ azụ gị?
5) Ị na-enweta nhụjuanya, radieshon ma ọ bụ ịgbada ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ gị?
Enwere onwe gị ịdee nọmba azịza gị.
Alexander Andorff, Chiropractor (MNKF)
Sissel Strand ekwu, sị:
Ruo ọtụtụ afọ, ụfọdụ ihe mgbu dị n'otu ikpere na-enye m nsogbu n'obi. Nke a na-eme n'abalị mgbe m ga-agbatị ụkwụ m. Ebugola ikpere n'ihu n'ihu. Mgbe m bụ nwata, m na-adakarị ikpere n’ala. Na nwetara ihe a na-akpọ "mmiri" na ikpere. Chee na oge oyi na-afụ ụfụ karịa. Ọ nwere ihe m nwere ike ime nke ga-ebelata mgbu ahụ?
Ọ na-ada na-agwụ ike.
1) Afọ ole ka ọ dị otu a?
2) Ị na-enwekwa nhụjuanya ụkwụ n'otu ụkwụ ahụ?
3) Ị nwetụla imerụ ikpere gị ma ọ bụ ihe yiri ya?
4) Ihe mgbu abalị ndị a na-eme kwa abalị - ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ ọnụnọ?
Kyphosis n'olu ekwu, sị:
Enwere m kyphosis n'olu m, ọ na-ada ada na isiri m ike n'olu. Ọtụtụ isi ọwụwa erughị ala, migraines na isi ọwụwa anya. Ụbọchị ụfọdụ adịghị ike na ogwe aka n'ihi nkwụsịtụ. Mgbu ala ogwe aka. Osteoarthritis nke olu na mkpịsị aka. Agbalịrịla ọtụtụ usoro ọgwụgwọ physiotherapy nke na-enyereghị aka karịa otu nke m jụrụ oyi n'abalị. Chiropractic ọ na-enyere aka?
Ọ dị ka ị nwere nnukwu ọrịa na nsogbu na sistem musculoskeletal. Kyphosis n'olu dị nnọọ iche.
Eleghị anya ị ga-achọ ọgwụgwọ ogologo oge - ọkacha mma physiotherapy - yana mgbakwunye na ọzụzụ na-aga n'ihu. Mmega ahụ na mmega ahụ ga-abụ naanị ụzọ isi dozie ihe kpatara nsogbu gị. N'ezie, ọgwụgwọ nkwonkwo - nke nwere ezigbo ihe àmà n'azụ ya - nwekwara ike ịrụ ọrụ dị mkpa n'ọgụ gị na-alụghachi na ndụ enweghị mgbu.
Ihe kacha mkpa ị na-eme ugbu a bụ ịchọ enyemaka n'aka onye dọkịta - onye nwere ike inyere gị aka ịzụ ọzụzụ n'ọsọ gị.
Alexander Andorff (Chiropractor - MNKF)
1.) Ma eleghị anya nwere ya 1 afọ ma ọ bụ karịa.
2.) Ọ na-agba na mgbu n'akụkụ afọ na azụ.
3.) Ọ kasị njọ mgbe m na-anọdụ ala na nwere na-ebili, ike na-mgbe m ogologo. Ọ na-arapara nke ukwuu na hip mgbe ahụ.
4.) Emela otu foto nke ala azụ 10 afọ gara aga approx. A gwara m na m na-eyi uwe na-adịghị mma, ma na ọ dịghị mma.
5.) Nwere ike na-eche na ọ radiating ala ikpere mgbe ụfọdụ.
Okwu ekwu, sị:
Enwere m mgba mgbu nke m chere na ọ nwere ike ịbụ n'ihi nrụrụ na pelvis ruo ọtụtụ afọ.
Dọkịta ekwuola na enwere m ọdịiche na ogologo ụkwụ na scoliosis mana amabeghị ma otu kpatara nke ọzọ.
Malitere na mgbu azụ azụ n'oge uto. Mgbe e mesịrị kpochapụ isi ike na azụ azụ na ibelata mgbu. Nwere na ikpeazụ 10-15 afọ ahụmahụ na-abawanye mgbu na hips, elu azụ, ubu na olu. Ihe mgbu hip n'akụkụ aka nri na-apụta nke ọma na m na-eteta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ abalị ọ bụla site na mgbu na-esi na hip na gbadaa n'èzí ụkwụ ruo n'etiti ụkwụ.
Ihe mgbu na ọdụ ọdụ na-ewutekwa m nke ukwuu ma ọ bụrụ na m anọdụ ala nke ukwuu, ọ na-ewute m nke ukwuu ma m biliri ọzọ. Isi ọwụwa n'olu na-egbu m mgbe ụfọdụ. Ubu na-enwekarị ọkụ (akpụkpọ anụ mucous). Mgbe m guzoro ọtọ na ala m na-agbagọ nke ọma na otu ubu dị 2-3 cm karịa nke ọzọ. Enwere m ngwọrọ ngwụrọ ma nwee mgbu na-adịghị ala ala.
N'ihi na ọrịa m buru ibu, amaghị m ebe m ga-amalite na dọkịta na-enyekarị ọgwụ mgbochi mgbu. Ejila ọgwụ mgbochi mkpali na analgesic dị iche iche karịa ma ọ bụ obere oge niile maka afọ 20-30.
Adị m afọ iri anọ na asaa.
Ọ dị ka ị na-akọwa ọnọdụ scoliosis - nke nwere ike ịkpatakarị ọrịa ndị ị na-akọwa.
Signsdị ihe atụ nke scoliosis:
- mọzụlụ na-adaghị adaba n'otu akụkụ nke ọkpụkpụ azụ
- A 'rib hump', ebe ị na-ahụ na ọgịrịga n'otu akụkụ dị elu karịa nke ọzọ
- Ogologo pelvic na-ezighi ezi, ogologo ogwe aka na ogologo ụkwụ
- Nzaghachi akwara na-adị nwayọọ mgbe ụfọdụ (n'ọnọdụ ụfọdụ)
Kedu ka onye dibịa ga-esi chọpụta ma ị nwere scoliosis?
Ọ bụrụ na ọkpụkpụ azụ nwere mmụba nke ihe karịrị ogo 10, mgbe ahụ, a na-ekewa nke a dị ka scoliosis. Onye na-agwọ ọrịa ga-ahụ ma mee ọtụtụ nyocha (gụnyere ule Adam) iji nyochaa ọkpụkpụ azụ onye ọrịa.
Ọ bụrụ na a na-enyo enyo na onye ọrịa ahụ nwere scoliosis, mgbe ahụ, a ga-eziga onye ọrịa ahụ maka nyocha X-ray (chiropractor, therapist na dọkịta bụ otu ndị ọrụ atọ nwere ikike iji nyochaa ụdị nyocha a). A na-ewerekarị kọlụm mkpokọta (azụ dum) n'ọnọdụ kwụ ọtọ ma n'akụkụ ma n'ihu. Iji tụọ ogo scoliosis, onye na-ahụ maka redio ga-enyocha akụkụ Cobb wee hụ ogo ogo nke ngbanwe dị na ya. A na-atụ akụkụ Cobb site n'ịtụle akụkụ nke vertebra dị elu nke na-etinye aka na ọnọdụ scoliosis na vertebra dị ala gụnyere.
Ya mere achọrọ m ibido na ndị a:
1) Debe oke nke scoliosis gị
2) Nyochaa naanị mgbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. backrests iji dozie ọdịiche ogologo ụkwụ
3) Nyochaa ọgwụgwọ anụ ahụ nke akwara na nkwonkwo emetụtara - ndị na-egbu mgbu na ọgwụ mgbochi mkpali na-arụ ọrụ ha mgbe enwere nnukwu mgbu, ma ekwesịghị ịbụ ihe ị na-aga n'ihu na ogologo oge.
Ebee na obodo i bi? Enwere m ike n'ezie inyere gị aka na nyocha na ntinye aka ọ bụla na nyocha nyocha nke diagnostic ma ọ bụrụ na ị nọ nso ebe m nọ.
Ndewo, daalụ nke ukwuu maka azịza ozi ahụ. Anọ m na Troms ma enwere m obi ụtọ ịnata ndụmọdụ gbasara chiropractor ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa ntuziaka na mpaghara m.
Mona M. N ekwu, sị:
Enwere m nsogbu na ikpere m maka oge nke afọ 3 gara aga, mana ọ na-arị elu na ala, ma oge oge na ọkwa mgbu.
Achọpụtala ma ikpere na-agba ọsọ (nke dọkịta) na ikpere na-awụ elu (site n'aka chiropractor). Ihe mgbu m na-agbasasị na gburugburu ikpere ikpere niile, yana "n'azụ" ma ọ bụ "n'ime" ma ọ bụrụ na ị ghọtara .. Ma na-abụkarị n'okpuru ikpere. Ma mgbe mgbatị ahụ gasịrị ma karịsịa mgbe m na-edina ala, na ụkwụ m gbatịpụrụ kpamkpam.
Ihe mgbu malitere na 2013/14 mgbe m malitere ịgba ọsọ nke ukwuu (mgbe ụfọdụ 10 km x4 n'izu), ọ dịghịkwa mgbe m zụrụ ike.
N'ọnwa Septemba afọ gara aga, agbajiri m ụkwụ ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke anaghị arụ ọrụ ruo February nke afọ a.
Ma mgbe ahụ, ọ bịara dịkwuo njọ ọzọ n'afọ a ozugbo m malitere ịmalite ọzọ. Ugbu a ihe mgbu ahụ dị njọ ma ikpere m na-egbu mgbu kemgbe March. Ha na-arụ ọrụ ma n'abalị, mgbe m na-eje ije, mgbe m na-anọdụ ala, ọ fọrọ nke nta mgbe niile, ma karịsịa mgbe ọrụ (ma ọ na-aga nke ukwuu na ala mgbe ahụ). Anọla na ezumike ọrịa kemgbe ọnwa Febụwarị.
Agara m dọkịta, physiotherapist na chiropractor maka oge mbụ n'afọ a.
Agbalịrị m ntakịrị ọgwụgwọ nke ọ bụla n'ime Eprel na Mee, ihe niile site na mgbatị ike nke apata ụkwụ, ruo electro-acupuncture, na ọgwụgwọ ikuku. O yiri ka ọ na-arụ ọrụ, ma mgbe ahụ, agara m na ndịda dị ka onye ndu njem, ma ugbu a, ihe mgbu ahụ alaghachila azụ karịa ka ọ dịbu, ma ọ na-akawanye njọ. Ihe mgbu ahụ laghachiri ihe dị ka izu 2 gara aga ka m wụliri elu ma gbaa egwu maka ihe dị ka nkeji iri dị ka mascot.
Ọ na-afụ ụfụ ma n'elu, n'okpuru na n'ime / n'azụ kịtịkpa, ma mgbe m na-eje ije na mgbe m dina / nọdụ ala ..M na-aṅụ ihe mgbu siri ike ma na-ekpuchi ikpere m 2-3x kwa ụbọchị mana ọ na-akawanye njọ ..
Ajuju m bu, enwere olile anya? Ọ nwere ihe ọzọ m nwere ike ịnwale nke m na-anwalebeghị?
Ọ bụ 100% na ezumike ọrịa maka otu izu ugbu a, mana ọ nwetabeghị nke ọma kemgbe ihe ahụ mere na ịgba egwu / ịwụ elu, yabụ m na-eche ma m ga-ala n'ụlọ ma ọ bụ na ọ dị mma ịga n'ihu na ọrụ? .. 'm na-arụ ọrụ m na-eje ije ihe dị ka 7-10,000 nzọụkwụ kwa ụbọchị. Enwere m ike ime mmerụ ahụ dị njọ n'ikpere m ma ọ bụrụ na m na-aga n'ihu na-eje ije / mebie ha?
Nabata ndụmọdụ na ndụmọdụ niile ma dị njikere ịnwale ọtụtụ ihe ugbu a enwere m nkụda mmụọ na ntakịrị nchegbu ..
Alexander v / fondt.net ekwu, sị:
Hụ na ị naghị ekwu maka onyonyo n'agbanyeghị na nke a na-amalite ugbu a ịghọ nsogbu na-adịte aka. Enwere MRI ma ọ bụ diagnostic ultrasound nke ikpere gị - ma ọ bụrụ otú ahụ, ha na-egosi mmebi ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị yiri ya?
A na-enwe olileanya mgbe niile maka ọgwụgwọ, ma ọ bụrụ na ngụkọta "ibu / ike ikike / ọgwụgwọ" adịghị abawanye, mgbe ahụ mmebi ga-ma - ma ọ bụrụ na ọgwụgwọ na-aga efu --anọgide ma ọ bụ na-akawanye njọ ma ọ bụrụ na ngụkọta oge na-aga mwepu.
Ọ dịghị abụọ mmerụ ahụ bụ kpọmkwem otu na maka ụdị nsogbu a - karịsịa mgbe ọ na-amalite na-adịgide adịgide ruo ogologo oge - ọ ga-abụ na ọ ga-achọ ka a otutu ọzụzụ mmezi (ụkwụ, nwa ehi, apata ụkwụ na hips, nakwa dị ka isi ga-abụ. wusiri ike iji belata ibu na-ezighi ezi na ikpere ) yana ụfọdụ ọgwụgwọ na-ebelata mgbaàmà (ngwọta nrụgide nrụgide bụ ụkpụrụ ọla edo maka nsogbu akwara).
Mona ekwu, sị:
Ndewo Alexander. Daalụ maka azịza. Emeela m foto MRI nke ikpere m ka ọ na-akawanye njọ. Nweta azịza ndị a:
"MRI ikpere aka nri:
Enwere menisci na-adịghị emebi emebi, akwara cruciate, ligaments mpụta, na akwara patellar.
Ụmị ọkpụkpụ nkịtị na cartilage articular na nkwonkwo femorotibial.
Obere cartilage na-adịghị ahụkebe na akụkụ etiti articular nke patella. Enweghị ihe akaebe ọzọ maka pathology ugbu a.
R: Cartilage na-adịghị ahụkebe na-adịghị ahụkebe na akụkụ etiti nke patella, ma ọ bụghị nchọpụta nkịtị.
MRI ikpere ekpe:
A na-enwe nsọtụ nsọ, akwara cruciate, ligaments mpụta na akwara patellar.
Cartilage articular na-adịghị mma na nkwonkwo femorotibial. Enweghị hydrops ma ọ bụ cyst Baker dị mkpa.
R: Cartilage articular na-adịghị agafe agafe na akụkụ akụkụ nke etiti nke patella, ma ọ bụghị nchọpụta nkịtị ".
Kedu ihe nke a pụtara? Ọ bụ ikpere jumper m nwere?
Na-enwe ihe mgbu mgbe niile ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ọbụlagodi mgbe m dinara ala. Enwere m ike ịga ogologo ebe dị anya tupu ọ na-afụ ụfụ, ma ọ bụrụ na m gbadaa ikpere m ntakịrị ma ọ bụ buru obere mwụ elu, enwere m mgbu ruo ọtụtụ ụbọchị, mgbe ụfọdụ izu ole na ole.
Ekpere dị ka adịghị ike.
Kedu ihe nkọwa nke ihe oyiyi MRI pụtara na ọ nwere ihe ọ bụla m nwere ike ime?
Ndị ọzọ H. ekwu, sị:
Nwere mgbe ogologo oge nke isi ike na mgbu na ala azụ e gosiri a modic mgbanwe na ala azụ (ọkwa 1-2). Kedu ihe nke ahụ pụtara na gịnị ka m ga-eme ọzọ ugbu a? Na-enweta mgbu azụ dị ala na-egbuke egbuke ụkwụ abụọ.
Turf ekwu, sị:
A bụ m onye dị afọ iri isii na ise. Ruo ọtụtụ afọ, anọwo m na-akpụ akpụ nke ukwuu na-emesi ike na ikpere aka nri m. Otu afọ gara aga, m na-agbatị akaị n'elu ọkpụkpụ n'aka ekpe nke patella n'akụkụ ogologo ụkwụ nke ụkwụ, ikpere aka nri.
Ruo afọ abụọ ma ọ bụ atọ, m na-enwekarị ọkụ n'abalị (ọ bụghị sweaty, ọ bụghị na-ekpo ọkụ iji emetụ aka, ma na-enwe mmetụta dị oke ọkụ n'okpuru anụ ahụ). Echere m na enweghị oke okpomọkụ n'abalị na-abịa site na ọrịa lyme, nyocha ọbara nwere nnukwu nsonaazụ maka ọrịa lyme.
2 1/2 ọnwa gara aga m na-edina na iferi ụkwụ n'okpuru nanị mpempe akwụkwọ na na na na na na na windo meghere na a high ugwu nkwari akụ. Ka ọ na-erule abalị, m tetara n'ụkwụ m jụrụ oyi.
1) ihe mgbu na-egbu mgbu na akwara nke a kpọtụrụ aha n'elu, enwere m mmetụta
2) ntamu na ikpere. Enweghị m ike ihi ụra. N'ime ụbọchị iri mbụ, a na-emeghachi nke a site n'oge ruo n'oge site n'oge ruo n'oge. N'ime ụbọchị iri sochirinụ, a na-emeghachi nke a kpamkpam kwa abalị.
N'ime ọnwa na-esote, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na m na-atamu ntamu na ikpere ikpere m, kpamkpam kwa abalị. N'ọnwa gara aga enwere m ntamu na ikpere na
3) igbu mgbu na ọkpụkpụ n'aka ekpe nke patella, otu na abalị ọzọ mgbe ụfọdụ. N'ime ngụkọta oge nke ọnwa 2 3/4, enwere m mmetụta ntamu na isi ike n'ụtụtụ nke kwụsịrị mgbe obere oge gasịrị. Mgbaàmà adabaghị nchoputa ọ bụla doro anya. Ahụtụbeghị m ihe mgbu na mmegharị ụkwụ, ọ dịtụbeghị mgbe m gbagọrọ agbagọ ụkwụ m, enwebeghịkwa m ihe mgbu iji rịdata steepụ, ọ na-esiri m ike inwe mgbu n'ehihie, enwetụbeghị m mgbu ịtụgharị n'àkwà, enwetụbeghị m mgbu. ọ na-acha ọbara ọbara, enwebeghị m ọzịza, enwebeghị m ihe mgbu symmetrical, enwebeghị m nnukwu sink, enwebeghị m ahụ ọkụ. M na-eteta n'ụra n'ime ihe mgbu n'etiti abalị, naanị na ikpere aka nri m. Mgbanwe ihu igwe nwere ike inwe ihe ị ga-ekwu, mana ọ bụghị eziokwu mgbe niile.
Ihe ọṅụṅụ Rhubarb mere ka ntamu na ụkwụ aka nri dum. X-ray na-egosi naanị cartilage na-eyi na ọkpụkpụ adịghị emebi emebi. Transillumination nwere ike igosi ntakịrị ụkọ meniscus na cysts onye na-eme achịcha na azụ, mana nke ahụ na-akọwa ntakịrị akpa mmiri nke dọkịta ahụ chọtara (mana enweghị m ike ịhụ akpa mmiri). Dọkịta ahụ aghọtaghị ihe m na-eme adịghị mma. Onye ka elu kwenyere na ọ dịghị njikọ kpọmkwem n'etiti ọrịa Lyme na mgbu ikpere.
M na-aga ME na rheumatology n'ime otu ọnwa na ọkara. Kedu ihe m na-eme adịghị mma? Ọ ga-adị m mma ịnọ jụụ, m ga-ejiji ikpere m na-ekpo ọkụ, ma ọ bụ enwere m ike ịga ezumike mgbe m na-eche ma na-aga ije n'ụdị mkpụmkpụ?
Vigdis ekwu, sị:
Ajụrụ m na vondt.net na mbụ, mana ị maghị maka ihe m na-achọ enyemaka.
Achọrọ m ozi gbasara ọgwụgwọ / usoro maka chondromatosis na ọrịa obi, ma e nwere N'ezie obere ihe ọmụma banyere nke a n'etiti therapists (na m na-na ọtụtụ…) Ọ e gosiri na m site a pathologist mgbe ikpere ịwa ahụ maka ihe ruru. 10 afọ gara aga, ma ihe ọmụma banyere nke a dị oke n'etiti ndị na-agwọ ọrịa, n'ihi ya, ọ dị mwute ikwu na ọ bụ obere enyemaka iji nweta.
Enweela m ịwa ahụ synovectomy anọ n'ikpere m iji wepụ anụ ahụ na-ere ọkụ wee nweta mma ruo oge ụfọdụ mgbe nke ahụ gasịrị, ma mgbu ahụ na-alọghachi azụ. Ọkpụkpụ m na-ekwu na nke a bụ ọrịa autoimmune nke na-agbaji nkwonkwo. Ugbu a nwere osteoarthritis grade 3 nwere nnukwu cartilage mikpuru na ọkpụkpụ ekpughere na ikpere. Mgbe ikpeazụ ikpere ọrụ m nwetara Kolkisin site na rheumatologist nke nwere mmetụta maka ihe ruru. Ọnwa 3, mana ugbu a ọ dị ka ha enweghị mmetụta ọzọ. Nzọụkwụ na-esote ugbu a bụ prosthesis, ma ọ na-ewute m n'ihi ya. Ana m ewere Nobligan retard + Paracet kwa ụbọchị ma nwalee ọtụtụ ọzụzụ ahụ (ọzụzụ ike, ọzụzụ ọdọ mmiri, wdg), mana ọ na-ebutekarị mgbu na ọzịza ruo ụbọchị ole na ole. Ma m ka na-agbalị ịzụ ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Agara m onye na-ahụ maka ahụike physiotherapist nwere ebe mgbatị ahụ na onye na-agwọ ọrịa ntuziaka. anabatala Ụlọ ọgwụ Rheumatism, ma ọbụna n'ebe ahụ ha enweghị ahụmahụ na nke a.
N’ihi ya, m makwara ihe mgbe a chụrụ m n’ọrụ. Ọ dị ka n'ihi na nchoputa ahụ dị ụkọ, ha na-akụ ubu ha wee sị "Amaghị m". Ha anaghị achọ ime ya. Onye na-ahụ maka ọkpụkpụ bụ naanị "onye ọkwá nkà" ebe a, ma mee ihe ọ nwere ike ime.
Echere m na ọ bụ ihe ijuanya na ọ gaghị ekwe omume ịnweta enyemaka ma ọ bụ nduzi ọ bụla na ọrịa a. O doro anya na ọ dị ụkọ, mana site na otu facebook nke vondt.net enwetara m onye ọzọ nwere otu nchọpụta ahụ, onye nwere nnukwu ihe mgbu ma na-agbasi mbọ ike inweta enyemaka. Ya mere, ọ pụghị kpamkpam amaghị? Dị ka ọ dị ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka m kwụsị ịkwụsị ma gbalịa ịnakwere na ọgwụ mgbu siri ike bụ naanị ihe ọzọ. Ma ọ dịghị ezigbo ngwọta ..
Ị nwere, ma ọ bụ na ị maara onye nwere ọkachamara na nke a? Daalụ maka azịza.
Alexander ekwu, sị:
N'ụzọ dị mwute, enweghị m azịza ka mma na nke sara mbara maka gị. Maka enyemaka ndị mmadụ nwere ike ịnọ n'otu ọnọdụ ahụ, enwere m ike ịdụ gị ọdụ ka ị sonyere otu facebook "Rheumatism na Chronic Pain: Research and News".
Jisie na mgbake dị mma.
Alexander, pụọ. aut. chiropractor, M.sc. Chiro, B.sc. Ahụike, MNKF
AGL ekwu, sị:
Ọ na-ewute m nke ukwuu na hip ekpe m, ọ na-ewute m mgbe m dinara n'akụkụ m ma ọ bụ megharịa úkwù m. Ọ nọ na mgbu kemgbe ọnwa Mee nke afọ a. Agakwuru dọkịta ugboro abụọ ebe a na-enye m Voltaren otu oge, ka a gwa m ka m nọrọ jụụ, jee ije obere ka o kwere mee ma nọdụ ala dịka o kwere mee, nwetakwuo mma mgbe m na-eri Voltaren, ma laghachi ngwa ngwa mgbe m kwụsịrị. Iji ha eme ihe… Oge nke abụọ (na dọkịta ọzọ) a gwara m ka m na-arụsi ọrụ ike n'ịzụ akwara, dịka m na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ ugbu a. Malite ike ọgwụgwụ nke ịbụ ihe mgbu dịka m na-etetakarị n'abalị mgbe m tụgharịa ma ọ bụ dina n'akụkụ aka ekpe m ogologo oge. Enwere ndụmọdụ dị mma? Ekwesịrị m ịkpọtụrụ dọkịta ọzọ ma ọ bụ debanye aha na chiropractor, physiotherapist?
Eva ekwu, sị:
Ndewo! M na-eme egwuregwu metụtara circus ebe anyị na-ejikarị aka na-arụ ọrụ n'isi ma na-apụkwa n'akụkụ mgbe anyị na-ebuli ahụ elu n'ọnọdụ dị iche iche. N'ime ihe karịrị otu afọ enwere m mgbu na na gburugburu ubu bọọlụ n'onwe ya na njedebe nke ubu.
Nke a bụ naanị ihe na-ebute site na mmetụ aka ma ọ bụ site na mmegharị ụfọdụ na-adịghị egbu mgbu ma na-adịgide adịgide. A na-akpalite mgbu na-adọta ubu elu kwupụta ntị na / ma ọ bụ Anglịkan «ịmikpu ala n'ubu dị ka a push elu. Ntụgharị azụ nke ogwe aka nwekwara ike na-egbu mgbu. M na-agbakwa mbọ ka m bụrụ onye isi ike na mpaghara a - nakwa n'akụkụ obi / ihu. Onye na-agwọ ọrịa akwụkwọ ntuziaka chere na m nwere mmegharị ahụ na-adịghị mma ma rụọ ọrụ na nke a, mana mgbe mmegharị ahụ ka mma, nsogbu ahụ akwụsịghị. Ọ na-ewutekwa m ịkwaga ogwe aka m gbadaa n'ahụ m ma m jide ya n'akụkụ.
Enweghị m ike na ogwe aka / ubu na anaghị m enye nsogbu banyere nke a n'oge ọzụzụ n'agbanyeghị na m na-eche ya. Otú ọ dị, ụbọchị ole na ole mgbe ọzụzụ gasịrị, m na-esi ike. Ị nwere echiche ọ bụla ihe nke a nwere ike ịbụ? Na-enwe ekele dị ukwuu maka azịza. Agwara m ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa okwu mana ọ naghị adị ka m na-ahụ onye ghọtara kpọmkwem otú m si eji ubu eme ihe n'oge mgbatị ahụ ma nwee ike ịchọta nsogbu ahụ kpọmkwem.
Ihe mgbu gị nwere ike igosi nchikota nchikota nke muscular ahaghị nhata na mmerụ ahụ akwara nwere ike - yana enwere ike ịrụ ọrụ nkwonkwo na glenohumeral na nkwonkwo AC. N'ihi na ihe mgbu dị n'èzí nke ubu n'ụzọ ị si akọwa ma na-akpalite site na nrụgide, yana ụfọdụ mmegharị - ọ nwere ike ịdị ka ọ bụrụ na ọ bụ ọrịa na-egbuke egbuke nke supraspinatus na myalgias na-egbu mgbu jikọtara ya na akwara nkwụsi ike dị nso (pec majus). , ndị ọzọ rotator cuff mọzụlụ na elu trapz n'etiti ndị ọzọ).
Nyocha ultrasound nwere ike igosi ma ọ bụrụ na enwere mmerụ ahụ nke rotator cuff na ikpe gị. A na-atụ aro ọzụzụ a kapịrị ọnụ nke akwara cuff niile iji weghachi nguzo muscular (ma eleghị anya ị siri ike na akwara ụfọdụ yana adịghị ike na ndị ọzọ - maka ntụnyere).
Alexander, nde. chiropractor (M.sc. Chiro, B.sc. Health)
Daalụ maka azịza gị! Nyocha MRI ọ ga-ekpuchi otu ultrasound? Enyere m otu awa maka nke a (na 100 afọ n'agbanyeghị). Ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi na m ịzụ ọzụzụ ruo mgbe enyochala nke a nke ọma?
Ana m asị gị nnọọ.
Ee, nyocha MRI ga-enwe ike ikpughe mmebi akwara ma ọ bụ akwara ọ bụla - ikekwe ma ọ bụrụ na enwere mmetụta ọ bụla na labrum ma ọ bụ capsule nkwonkwo. A na-atụ aro ọzụzụ a na-emegharị emegharị - ma cheta mmega ahụ rotator cuff (karịsịa mmega ahụ ntụgharị dị mkpa na ọzụzụ ọzụzụ).
G ekwu, sị:
Nnọọ. Ruo afọ 5 enwere m nsogbu azụ. Afọ abụọ mbụ bụ naanị mkpụkọ akwara na ọ na-esiri ike ịnọdụ ala n'ala siri ike n'ihi ọkpụkpụ ọdụ. Ọ dịkwa arọ ịnọgide na-elepụ anya n'ime. Mgbe ọnwa isii gachara, nsogbu urination kwụsịrị. Mgbe afọ abụọ nke ọgwụgwọ physiotherapy gasịrị, nsogbu ọhụrụ na-apụta n'ụdị mgbu dị nkọ n'akụkụ aka ekpe na mgbu azụ azụ.
Enwere m foto na nyocha sitere na ọkachamara, mana m dị iche na ihe ha chere. Otu kwuru na ọ bụghị ihe ọ bụla, nke ọzọ kwuru na ọ dị mkpa ka e dozie nsogbu ahụ. Enwere m ike izitere gị foto x-ray site na email. X-ray n'oge na-adịbeghị anya kọwara na enweghị m nsogbu - naanị nkwonkwo facet na mmebi ha. Mgbe m malitere ịkwagharị, ije ije ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala, ihe mgbu na-abịa ma vortices na-apụ apụ. Onye na-agwọ ọrịa physiotherapist m kwụsịrị mmekorita ya na m n'ihi na mgbe afọ abụọ nke ọgwụgwọ gasịrị, anyị enweghị mmetụta ọ bụla. Ị nwere ike ị nyere m aka?
Alexander v / Vondt.net ekwu, sị:
Mba, enweghị m ike ịnyere gị aka karịa enyemaka ị nwetagoro n'aka ndị ọkachamara ahụike na ndị na-ahụ maka ahụ ike. Mana enwere ike ịkwado nyocha nke abụọ na kọntaktị mbụ akwadoro nso gị - dịka ọmụmaatụ. onye na-agwọ ọrịa ntuziaka ma ọ bụ chiropractor.
Ingrid ekwu, sị:
Atụlela m ịgakwuru onye chiropractor, mana m na-eche otú ọ ga-esi nyere m aka.
M na-eme karate dị ka ọ na-emebu ma na-azụ ọzụzụ, mgbe nsogbu ahụ dara. Ụda ịpị ugboro ugboro, mana enweghị mgbu na ikpere aka ekpe. Ma na ikpere aka nri enwere ụda "crunchy" ọzọ, na mgbe a na-etisa ọzụzụ ugboro ugboro na ọ na-enye mgbu. Mgbe ụfọdụ, ọ naghị ewute ya nke ukwuu, ebe oge ndị ọzọ ihe mgbu na-adị ukwuu nke na anaghị m eji aka nri m eme ọzụzụ. Otu ụda "crunchy" a na-abịakwa mgbe m na-ebugharị nkwojiaka m na nkwojiaka yiri adịghị ike. Ọ baghị uru dị ukwuu ịga mgbatị ahụ ma nwee ahụ mgbu.
Ma eleghị anya, 7-8 afọ gara aga, agara m physiotherapist n'ihi ụda. O chere na ọ dị mkpa ịgbalị ịgwọ ya tupu enwee mgbu. Mmega ahụ m mere n’aka m mere ka ahụ́ na-akakwu m njọ, amalitebeghịkwa m ịta ikpere ụkwụ. Na ikpere aka m nwetara acupuncture, nke m na-echeghị na ọ na-arụ ọrụ na n'ihi ego kpatara m họọrọ ịkwụsị ọgwụgwọ.
Ugbu a, a nọ m n'afọ asọmpi kachasị mma dị ka onye dị afọ 22, ọ ga-amasị m ka m ghara igbochi m ọzụzụ na asọmpi.
Ị maara ihe ọ nwere ike ịbụ na nkwonkwo dị iche iche?
Kedu ka enwere ike isi gwọọ nke a?
N'ihi nsogbu ndị na-adịgide adịgide ruo ogologo oge - na eziokwu ahụ bụ na ọnọdụ ahụ adịghị ka ọ dị mma, yana ịkpata oké mgbu mgbe ụfọdụ - a ga-enyocha ya na nyocha nchọpụta.
Onye chiropractor, dị ka dọkịta, nwere ikike ịtu aka na nyocha ihe onyonyo ọha (gụnyere MRI). Onyonyo ọhaneze pụtara na ị ga-akwụ naanị obere mwepu karịa ego ka ukwuu ma ọ bụrụ na ị ga-ewere nke a na nzuzo.
Otú ọ dị, ọ dịghị ada ụda dị ka a ga-asị na physiotherapist mere ihe ọ bụla na-ezighị ezi, ma ọ bụ ihe ijuanya na ọnọdụ ahụ adịghị mma, nakwa na omume ndị ị mere ka ọnọdụ ahụ ka njọ - nke n'oge ahụ dị ka epicondylitis mpụta ma ọ bụ tendinosis ọzọ na nkwojiaka. extensors.
Jørgen ekwu, sị:
Nwere ihe m na-eche bụ mbufụt nke ubu nke nọgidere ruo ụbọchị ise, ma na-eche ịjụ io na voltaren adịghị ka ọ na-enyere aka.
Ọ malitere site na nnukwu mmerụ ahụ n'olu (na-amaghị m ma ọ dị mkpa). Ihe mgbu na-adịgide adịgide ma ọ dịghị akawanye njọ na ụdị mmegharị ọ bụla. Ọ na-adị n'ụzọ dị ka na-eto eto mgbu / isi ọwụwa ala, n'etiti ubu (deltoid) - iwe mgbu na-adịghị aga. Nke a ọ dị ka mbufụt? M kwesịrị inye voltaren ụbọchị ole na ole ka ọ rụọ ọrụ (bụ n'oge eji). Ọzọkwa, ọ dị ka paracetamol na-ewere ụfọdụ n'ime ya nwa oge.
Ọtụtụ akwara rotator cuff, yana akwara ndị ọzọ dị n'ubu / ubu, na-etinye aka na nkwụsi ike na inye aka n'ọrụ dị mma n'olu. N'ihe banyere nnukwu mmerụ ahụ n'olu, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ụfọdụ akwara na-enwe mmetụta mgbu yana na "ọnọdụ nchekwa" iji chebe olu.
Enwere ike ịnwe mmerụ ahụ n'otu n'ime akwara rotator cuff a kpọtụrụ aha (dịka ọmụmaatụ supraspinatus) mgbe ị merụrụ onwe gị ahụ. Ọ na-afụ ụfụ n'abalị? Ọ na-ewute ụra n'ubu ahụ? Ọ nwere ike ịdị ka mmerụ ahụ akwara ma ọ bụ akwara - mana ọ ga-abụkwa, ọtụtụ mgbe, na-ebelata mmegharị ubu (dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ebuli ogwe aka gị n'akụkụ na ndọtị ma ọ bụ gaa n'ihu na mgbanwe).
Ọ ga-akwado gị ka nyochaa mgbu ahụ - ọ bụrụ na ọ bụ mmerụ ahụ akwara. N'ọnọdụ nke mmerụ ahụ dị otú ahụ, ọ dị mkpa ịmalite site na usoro ziri ezi ozugbo enwere ike maka mmetụta kachasị mma.
Ezigbo mgbake na chi ọma.
Silje ekwu, sị:
Ihe omume ndị ị biputere gbasara ọrịa ọgbụgba ọwara carpal, ọ bara uru mgbe a wachara ya ahụ ma ọ bụ ị na-akwado onye ọzọ? M na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara, m ka nọkwa na ezumike ọrịa
Ọ na-esi ike ịnye ndụmọdụ ndị siri ike n'ahụghị onwe gị na ọnọdụ ụlọ ọgwụ. Dị ka ọ na-adịkarị, onye na-ahụ maka ahụike na-enye gị mgbatị ahụ mgbe arụchara ọrụ dị otú ahụ - na akụkụ oge wdg.
Ị nwetabeghị ụdị atụmatụ ahụ?
Arne N ekwu, sị:
Nwee mgbu n'okpuru ụkwụ wee pụta ruo na mkpịsị ụkwụ anọ mgbe m na-akwagharị. Obere mma ka obere oge gasịrị. Echere na mbụ ọ bụ podegra, ma nnukwu mkpịsị ụkwụ dị mma ma ọ bụghị ọbara ọbara. Anọla na ọgwụ mgbochi mkpali otu izu wee chee na ọ na-aga n'ihu, mana mgbe ọ kwụsịrị mgbu ahụ laghachiri ka ọ malitere. Kedu ihe m ga-eme maka ya n'ihe gbasara ibu? Na-amasị ịgba egwu na-atụ anya na ụkwụ ga-adị mma.
Unni S ekwu, sị:
Nnọọ. Abụ m nwanyị 59 nke nwere ajụjụ "agaghị ekwe omume", mana m na-amalite inwe ntakịrị nkụda mmụọ! Nsogbu m bụ na mgbe m nọ n'ụlọ mposi ọ na-eme mgbe ụfọdụ na m na-enwe oké mgbu na ikensi / ọdụ ọdụ / n'etiti ụkwụ. Ihe mgbu ahụ bụ spasmodic ma nwee ike ịdịru ihe dị ka awa ole na ole, mgbe m nwetara ya, naanị m ga-edina ala chere ruo mgbe ọ kwụsịrị, were ihe m nwere ike ime nke ọgwụ mgbu.
Enwela ahụmahụ ịhapụ mmiri n'amaghị ama. enyochala ọtụtụ ihe na ndị dọkịta na-efefe isi ha na-ekwu na ha amaghị. Nke a nwere ike na-abịa site ugboro abụọ n'ọnwa ruo ugboro abụọ n'izu. Nwere scoliosis, eyi diski na ala azụ, calcifications wdg na anyị ochie ladies na-enweta. Na-adịbeghị anya nwere na-ebili n'isi ụtụtụ, mgbe ahụ, nwere nnọọ ihe mgbu n'elu hip crest na pelvis, na-agbapụ mgbu si na nnukwu mkpịsị ụkwụ, na m nwere ike ọ bụghị dina ala, nọdụ ma ọ bụ guzoro. N’ihi ya, m na-ejegharị n’ụlọ dị ka ọdụm nọ n’ụlọ mkpọrọ. Ihe m na-eche bụ: Ihe mgbu dị na ikensi / pelvis ọ nwere ike ime na nkwonkwo ma ọ bụ diski dị n'azụ azụ, pelvis ma ọ bụ ọdụ ọdụ?
Ajụjụ mbụ m mgbe m nụrụ ihe ngosi zuru oke dị otú ahụ: Achọpụtala MRI nke spine lumbosacral na pelvis? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka nsonaazụ ya gosiri?
PS - Okwu gị ka dị na nzacha spam anyị. N'ihi ya nzaghachi mbubreyo.
zaghachi ekwu, sị:
Na-azaghachi n'oge, ma nweela MRI, nwere nchịkọta mmiri na hips abụọ, tendonitis na hips abụọ gbakwunyere ntakịrị mgbanwe na nkwonkwo ileosacral n'akụkụ aka ekpe. Ajụjụ ọzọ, mmadụ kwesịrị iwere ya ngwa ngwa ka ọ bụ na-arụsi ọrụ ike? Na-agbalị ịdị na-arụsi ọrụ ike dị ka m nwere ike, ma ọ na-ata onwe ya ahụhụ n'abalị.
Ulrik S. ekwu, sị:
Ndewo! Mgbu ukwu na ala azụ. ghọrọ nnọọ isi ike. Enweghị ike ibuli ihe ọ bụla n'ala. Ezigbo ndị na-agwọ ọrịa maka nke a na Bergen?
Na Bergen enwere m ọtụtụ ndụmọdụ, mana onye chiropractor nke oge a na Bergen enwere m mmetụta dị ukwuu nke Christian Høst. Ọ ga-enwe ike inye gị ọgwụgwọ dị mma na ọkachamara gbasara nsogbu gị.
S ekwu, sị:
Enwere m ịwa ahụ maka ụkwụ abụọ (ọrịa na-adịghị ala ala) izu iri na abụọ gara aga. Enweela onye na-ahụ maka ahụike physiotherapist ji nwayọọ nwayọọ na-esochi ya, ma mesịa malite nwayọọ na ọzụzụ football ọzọ. Ihe mere m ji kpebie ịwa ahụ bụ na ọ bụ ihe mgbu siri ike ọbụna na-egbu mgbu ma ọ dịghị ọgwụgwọ ọzọ enyere aka (gụnyere nrụgide nrụgide, agịga, ịhịa aka n'ahụ, wdg). N'ihi nnọkọ ndị otu mba na-abịanụ na ụdị dị iche iche, ọ bụụrụ m oge ọjọọ maka mtp ọrụ, mana ahụghị ụzọ ọzọ m ga-esi pụọ mgbe enweghị m ike igwu egwu na 12%.
Nsogbu ugbu a, bụ na enwere m ahụ erughị ala mgbe niile, nke kachasị njọ na ụkwụ aka nri. Enweghị ọzụzụ nke gụnyere nke a, mana enwebeghị ọzụzụ zuru oke, yabụ amataghị ma ọ nwere ike ime ka ọ ka njọ. M nnọọ na-eche na ọ bụ nnọọ na-ewe iwe na-aga gburugburu na-eche banyere nke a mgbe niile na-eche na nke a nwere ike ịghọ ihe mgbu mgbe mbụ m ga-esi na-akụkụ nke a siri ike football nnọkọ. Agwara m onye na-ahụ maka ahụike ahụike na klọb gbasara nke a, mana ọ bụghị ya na physio otu mba. N'agbanyeghị, dịka m nwere ahụmahụ, a ga-ezigara m onye maara nke ọma banyere nke a. Ya mere, echere m na enwere m ike nweta ndụmọdụ sitere n'aka dikka gbasara ihe dị mma ọzọ ime ugbu a. Ọ dị mma inwe ike nweta ndụmọdụ dị iche iche site n'aka ndị maara ihe ha na-ekwu. O doro anya na nke a ga-etolite, mana enwere m ahụ erughị ala mgbe niile maka ọnwa 5-6-7 tupu ịwa ahụ, ana m eche ugbu a na ahụ erughị ala m nwere taa bụ ụdị dị nro nke ya.
Anụ ahụ nwere mmerụ/ahụhụ nwere ike etolite n'ụkwụ aka nri nke ị ka na-enye gị nsogbu.
Mgbe fasciotomy dị n'akụkụ nke ị megoro, onye na-ahụ maka physiotherapist nke na-ahụ maka nhazigharị gị ga-agafe akụkụ anọ. Ndị a bụ ụkpụrụ nduzi ụlọ ọgwụ doro anya - ma ị nwere ike ịgụkwu banyere usoro dị iche iche nwere ule metụtara a ga-eme n'usoro oge na ihe ndị yiri ya. ya (pịa ebe a).
Mgbe izu 12 gachara, ị ga-enwe ike:
- Kpesa mmụba nke 90-100% n'ozuzu ya
- Nwee mgbagharị osisi na azụ azụ 90% na-enweghị mgbu
Ị ga-enwekwa ike ịtụ anya ọganihu ọzọ n'ime izu anọ na-abịa site na iji nwayọọ nwayọọ na-abịakwute ọgwụgwọ na ọzụzụ. Yabụ na ọ bụghị ihe na-adịghị mma na ọ na-adịte ntakịrị ka izu iri na abụọ gachara - mana ị ga-ewere ya ka ihe karịrị 12% nke ọrịa gara aga? Ma ọ bụ njọ?
Ọ ga-akwadokwa ọgwụgwọ anụ ahụ mgbe niile (2x kwa izu) iji nọgide na-arụ ọrụ na mpaghara a na-agwọ ya.
UT ekwu, sị:
Nnọọ. Ị nwere ike ịkwado oche oche oche dị ka oche oche maka ndị na-alụ ọgụ na azụ mgbu? Enwere ike yana ma ọ bụ na-enweghị ọrụ tilt ma ọ bụ jiri ma ọ bụ enweghị nkwụghachi azụ? M na-anọdụ ala nke ukwuu n'ihu PC ma ọ bụ guzoro n'ọnọdụ kwụ ọtọ na ọrụ m. Nke a na-eduga n'ihe mgbu karịsịa na azụ azụ na mbụ enweela m prolapse na nkwụsịtụ na pelvis. Ya mere echere m na ọ dị m mkpa inyocha ụdị oche ga-adabara m ka m wee ghara itinye nrụgide na-enweghị isi n'azụ m mgbe m ga-anọdụ ala n'ebe ọrụ ruo ogologo oge. Amaghị ma ọ bụrụ na nke a dị mkpa n'ihe gbasara oche, mana m bụ nwa agbọghọ dị ike. Daalụ maka azịza gị.
7 izu gara aga m mebiri isi mkpịsị aka m site na ligament na-ewere mpempe ọkpụkpụ na mkpịsị aka m na ligament gbatịpụrụ (anwụrụ?). Ejila plasta ruo izu isii. Ewepụla plasta ma ọ nọrọla ụbọchị iri. Aka m na-ada ụra mgbe niile ma na-agba (ọ dị ka ọkụ eletrik n'aka). M ga-ebili ọtụtụ ugboro n'abalị, kwee aka m, ịhịa aka n'ahụ, wdg. Ọ bụ nnọọ iru ala. Elelela Google anya wee chee na ọ ga-abụrịrị ọrịa ọwara carpal. Agbalịrị ime mmega ahụ akwadoro dị iche iche, mana chere na ọ na-akawanye njọ. Ịma jijiji, ịhịa aka n'ahụ na ikwe ka ogwe aka gị na-efegharị mgbe m na-eje ije bụ eleghị anya ihe kacha mma. Ma enweghị m ike ime ya mgbe niile. Ọ dị ka ọ na-akawanye njọ ma m jide akwụkwọ, dee na ihe ndị ọzọ. Ọ na-achọsi ike ma eleghị anya ịhụ dọkịta. M̀ ga-echere ogologo oge ka m nwee olileanya na ọ ga-apụ n'onwe ya? (Ọ bụrụla ịwa ahụ maka ọrịa Morton na nke a nwere ike icheta nke a).
Alexander Andorff (MNKF) ekwu, sị:
Ọ naghị ada ụda. Oge mgbake ga-adabere n'otú mgbaji mgbawa ahụ na ọnyà gị siri sie ike. Kedu ka mmerụ ahụ siri mee? Ị nwere ike ị nweta mmerụ ahụ n'otu ọnọdụ ahụ?
Ọ nwere ike na-echetara mgbakasị akwara n'aka gị, ee - nke nwekwara ike jikọta ya na mmerụ ahụ ị nwetara. Mgbe izu asaa gachara, ị gaghị atụ anya na nke a agwọla nke ọma ka ọ bụrụ asymptomatic - Otú ọ dị, echere m na ị kwesịrị ịnata ntụziaka doro anya na ihe ị ga-atụ anya n'ihe gbasara oge nkwalite nke dọkịta gị.
Ihe mgbu ahụ nwekwara ike ịbụ n'ihi nchịkọta mmiri n'akụkụ mgbawa n'onwe ya na mmebi nke njikọ gị - nke si otú a na-ewepụta ohere n'ime aka ma na-eduga na ọrịa ọwara carpal n'ihi na mmiri na-ebuli ohere n'akụkụ akwara.
Mgbaàmà ndị ị kọwara dabara na mgbakasị akwara ozi nke akwara etiti. Eziokwu ahụ bụ na ị na-enweta ọganihu mgbe enwere mgbasa ọbara ka mma na-akwadokwa echiche ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọsi ike ka ị na-ada ụda, echere m na ị ga-ahụ dọkịta gị ma nwee mkparịta ụka. Ma n'ihe gbasara oke mmebi ahụ ị kwuru, ọ nwere ike ịdịtụ mma ịnọ na mgbu ogologo oge mgbe ịmechara "oge plasta" na-agwụ ike.
Mmega ahụ dị ọkụ nke na-abawanye mgbasa ọbara mpaghara ma na-ewusi uru ahụ ike dị n'ime ahụ ike nwere ike ịkpata mgbu nwa oge na mmalite, mana ka ọrụ ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-akawanye mma, ị ga-enwe ike ịtụ anya na ha ga-ewepụ iwe n'ọdịnihu.
Na-achọ gị ezigbo nkwalite n'ihu.
Alexander (Onye Chiropractor nyere ikike, M.sc. Chiro, B.sc. Health)
Ụda ekwu, sị:
Nnọọ. Enwere m olu mgbu na isi ọwụwa nke enwetara m ọgwụgwọ. Site na dọkịta na chiropractor, nchekasị bụ ihe kpatara ya, ya mere enweghị m ọrịa na-akpata. Isi ọwụwa ka mma, mana ọ ka na-alụ ọgụ n'olu siri ike na ntamu n'akụkụ aka nri nke olu, ubu na gbadaa azụ. Na mgbakwunye, enwere m nrụgide nrụgide na ọkara ihu m na olu na isi, akụkụ aka nri. Ruo afọ ole na ole, enwere m nrụgide nrụgide na akpụkpọ ahụ nke kwagara n'akụkụ dị iche iche nke ahụ. Ọ na-ewe ụbọchị ole na ole, mgbe ahụ ọ ga-apụ nwa oge, wee laghachi azụ. Nke a ka m maara ugbu a n'akụkụ aka nri dịruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu 2, na ụbọchị ụfọdụ enweghị m ike iyi akwa ịchafụ n'olu m ka ọ na-afụ ụfụ. Ọ bụ mbufụt? Enwere m ọrụ ịnọdụ ala na ekwentị nduzi PR n'ihu PC ụbọchị niile. Enyerela akara ezumike ọrịa maka ọnwa asatọ. Kedu ihe nke a nwere ike ịbụ. O meela imerime / omume, eme dị mfe olu omume, mindfullness, ma ọ na-aga n'ihu na-atamu ntamu na agafeghị oke mgbu na mgbu na akpụkpọ.
Ndewo! Ekpere na-egbu m na mberede mgbe m na-agba ọsọ ntakịrị ihe karịrị otu izu gara aga. Ihe mgbu na-abụkarị n'èzí ikpere mana n'ikpeazụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpere dum. M na-agba ọsọ ugboro abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, mgbu ahụ apụtawokwa mgbe ihe dịka 2-3 km gasịrị. Kedu ihe nke a nwere ike ịbụ? Ogologo oge ole ka m ga-echere ịgba ọsọ ọzọ?
Alexander v / Achọghị ekwu, sị:
Dabere n'ihe ị na-ede, ọ nwere ike ịdị ka ihe mgbu dị n'ókè ụfọdụ n'ihi ọrịa iliotibial band syndrome. Nke a na-ebutekarị mgbu na-esi n'èzí ikpere wee banye n'ikpere n'oge ibu ujo. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpata bụ mgbakasị meniscus n'ihi na ị na-amụbawanye ọsọ ọsọ gị ugboro ugboro. Gbalịa iji ijegharị na-agba ọsọ dochie opekata mpe otu izu wee hụ mmetụta gị mgbe nke ahụ gasịrị.
Na-echetakwa na ọ dị ezigbo mkpa ka ị na-eme mgbatị ahụ zuru oke iji belata ikpere na akụkụ ya. Anụ ahụ úkwù siri ike na-eduga n'ibu dị mma karịa mgbe ọ na-agba ọsọ.
Marianne ekwu, sị:
Ndewo! Abụ m nwanyị na-arụsi ọrụ ike na ahụike na-ahụ n'anya nke 42 bụ onye achọpụtara na ọ na-agbaji labrum na hip, na mgbakwunye na (ma ọ bụ n'ihi?) Ịkụnye. N'azụ enwere mmetụta dị iche iche na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke a na-akpọ mgbanwe degenerative, yana cysts synovial. Na-enwe nsogbu na mgbu mgbe m na-eje ije ma guzoro, yana mgbu abalị. A na-ezo aka na nyocha nke hip arthroscopy, ma ọ nwere ike were ọtụtụ izu na ọnwa tupu m eruo. M na-atụ egwu na a ga-etolite osteoarthritis na nkwonkwo, na-ama na-arahụ na-adịghị agwọ ọrịa maka banyere 10 izu. Ọ na-arụsi ọrụ ike mgbe niile, na-azụ ugboro 3-4 n'izu, njem ugwu na-agakarị na njem kwa ụbọchị. Ugbu a ọnọdụ ahụ rụrụ arụ na enweghị m ike ije ije ma guzoro ogologo oge n'oge na-enweghị ihe mgbu. Kedu ụzọ nkuzi m nwere ike iji? Nwere ohere ịbanye n'ọnụ ụlọ ike zuru oke.
Hey Marianne! Site na ịpịa hip, m na-eche na ị pụtara 'pincer impingement'? Mgbawa labrum n'úkwù nwere ike ịbụ, dị ka ị hụworo, na-enwe nkwarụ nke ukwuu ma na-enye ihe ndabere maka ọtụtụ ihe mgbu ma n'ehihie ma n'abalị. Site na mmerụ ahụ hip dị otú ahụ, ọ dị oke mkpa ịzụ ọzụzụ kpọmkwem na mmega ahụ ziri ezi.
M n'onwe m na-akwado iji mgbatị ahụ ma ọ bụ obere band iji kewapụ otu akwara ziri ezi. Ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke mmemme mmemme dị otú ahụ na nke a vidiyo (njikọ ahụ ga-emepe na windo ọhụrụ).
O doro anya na ihe mgbu gị na-akawanye njọ site na mkpakọ - ya bụ mgbe a na-ejikọta ihe owuwu ọnụ - ya mere, m ga-akwado usoro ọgwụgwọ ya na onye na-ahụ maka ọgwụgwọ ọha na eze nwere ma ọgwụgwọ traction, nchịkọta nkwonkwo na-emegharị na ọgwụgwọ laser, yana ọgwụgwọ nrụgide nrụgide. maka akwara ike gwụrụ n'úkwù gị.
PS - Na mgbakwunye, a ga m akwado ịgba ígwè na igwe mgbatị ahụ na igwu mmiri.
RockSmith ekwu, sị:
Ndewo! Abụ m onye ọrịa a wara m ahụ ugboro ise. Ihe dị ka ụbọchị iri na anọ gara aga mgbe m nwere ọrịa bertolotti.
Ọkpụkpụ úkwù m na azụ azụ m nwere nrụrụ n'ezie.
Agbalịrị m ịchọta ụfọdụ ozi gbasara ọrịa ahụ, mana chọta naanị ibe Norwegian ma ahụtawo m gị ya.
Ọ dị m ka ya bụrụ na m chọtakwuo ozi. Ihe niile si otú ndị mmadụ si ebi ndụ na ọrịa, ma ọ bụrụ na ha na-akawanye / mma karịa afọ, ma ọ bụrụ na ha nwetara mma / njọ si arụmọrụ, wdg Ị nwere ihe Ama m?
Nicolay v / Ahụghị Ya ekwu, sị:
Ndewo! Anyị ga-ewega nke a na ndị editọ, ka anyị wee nwee ike ịmepụta akụkọ nyocha zuru oke yana ozi dabere na ndị ọrịa Bertolotti metụtara. Daalụ maka ime ka m mara. Na-echere gị echiche kacha mma!
Christine ekwu, sị:
Enwere m ọdịiche ogologo ụkwụ nke 4.4 cm. Enwere m X-ray azụ m na March, a gwara m na enwere m scoliosis na azụ azụ m na ogo 32. Na obere scoliosis na spain thoracic nke na-atụ naanị ogo ole na ole.
Nke a na-atụ m egwu nke ukwuu n'ihi na agụọla m na ọ bụrụ na ị nwere azụ gbagọrọ agbagọ, ya bụ scoliosis, ọ nwere ike itinye nrụgide na ngụgụ na obi ma kpatara nsogbu iku ume na nsogbu obi.
M na-atụ egwu nke ukwuu na scoliosis m nwere na azụ azụ m na scoliosis m nwere na ọkpụkpụ azụ m nwere ike inye m nsogbu na ngụgụ ma ọ bụ obi m.
Enwere m olileanya na m nwere ike nweta azịza na scoliosis ogo 32 m nwere na azụ m nwere ike imetụta ngụgụ ma ọ bụ obi?
Ma ọ bụrụ na obere scoliosis m nwere na thoracic spain nwere ike imetụta ngụgụ ma ọ bụ obi?
Na-echegbu m mgbe niile maka nke a!
Hey Christine! Otu n'ime ihe mbụ ị chọrọ iji nweta azịza ya bụ ụzọ scoliosis gị si agbagọ - ọ bụrụ na ọ dabere na obi na ngụgụ, ọ nweghị ihe egwu ọ bụla. Ị na-ekwukwa na ọ bụ naanị "obere scoliosis na spine thoracic", n'ihi ya, ọ dịghị ihe ize ndụ na ọ nwere ike ịdị ize ndụ maka ngụgụ na obi. Scoliosis ga-abụrịrị oke, ogo 70 na n'elu, ka ọ dịgidere na ngụgụ na obi (1).
Isi mmalite: 1. Penn State Hershey Medical Center
Katrina ekwu, sị:
Ndewo! Egburu m n'azụ n'etiti ọnwa Ọktoba. Ọ bụghị nnukwu ọsọ, mana ọ nwere ubu na-egbu mgbu. Gaa na chiropractor ugboro ole na ole ma nwee mmetụta mara mma mgbe otu ọnwa gasịrị. M wee mee ihe nzuzu Apụbeghị m n'igwe ịkwọ ụgbọ mmiri tupu ya emee olu na akụkụ ubu niile siri ike. Kedu ihe mere? Agwọghị anụ ahụ dị nro ebe ọ bụ na enwere m mmeghachi omume dị ukwuu. Ọ na-adị m mma mana enwere m ihe mkpali na-egbu mgbu na-aga. Ọ bụ ụdị mbufụt m nwetara? Ekwesịrị m ịhụ chiropractor ọzọ? Ogologo oge ole ka mmeghachi omume mkpasu iwe dị otú ahụ nwere ike ịdịru? Mgbe m bufee anụ ahụ adịghị ike, usoro ọgwụgwọ anụ ahụ dị nro na-amalite ọzọ?
Chiropractor Alexander Andorff ekwu, sị:
Dị ka ị maara nke ọma, njikọ azụ azụ na-ejikọta ya na whiplash. Nke a bụ ọnọdụ nke nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ na-akawanye njọ dabere na ihe owuwu ndị agbatịchara / mebie na ihe mberede ahụ n'onwe ya. Ọtụtụ ihe atụ nwekwara ike igosi na nke a nwere ike ime ọbụna na obere ọsọ.
Dabere na nkeji oge ị kpọtụrụ aha na igwe ịkwọ ụgbọ mmiri (nkeji 15), echeghị m na ị mere ihe ọ bụla "na-ezighi ezi", kama na ị nweghị isi. Dabere na ihe ị na-ede, ọ nwere ike ịdị ka ụfọdụ akụkụ ejiriwo mmeghachi omume nchebe na-emeghachi omume na nchịkọta dị ukwuu nke anụ ahụ dị nro na-emetụ n'ahụ etolitela gburugburu ebe ndị emetụtara.
N'iburu n'uche na ị nọ n'ihe mberede, m ga-adụ gị ọdụ ka ị were MRI nke olu na kọlụm thoracic elu (n'elu thoracic spine) - iji wepụ ihe ọ bụla n'olu. Onye chiropractor ị kpọtụrụ aha nwere ikike iziga gị na nyocha onyonyo dị otú ahụ.
N'ime usoro ị nwere ike ịmalite ugbu a, m ga-akwadosi ike ịme mgbatị ahụ maka imesi ike ubu, ubu na mgbanwe n'olu. Ndị a nwekwara mmetụta ụlọ ọgwụ gosipụtara megide mgbu olu. Ị nwere ike ilele vidiyo ndị a na ọwa YouTube anyị ya.
Ekwesịrị ịme mmega ahụ ugboro anọ n'izu. Ọ bụrụ na ị nwetaghị ọganihu, m ga-akwadokwa ịzụ akwara DNF (mgbanwe olu dị omimi) - nke nsogbu olu olu na-emetụtakarị.
Asị gị afọ ọhụrụ obi ụtọ!
Alexander Andorff (Chiropractor nyere ikike, MNKF)
Harald ekwu, sị:
Nnọọ. Enyi m nwoke nwere azụ mgbu na-adịghị ala ala, kpọmkwem L4 ma ọ bụ S1, nke m tinyere akwụkwọ maka ya. Anyị na-agakwuru chiropractor, ndị dọkịta .. ma ọ dịghị onye nwere azịza, ọ dịghị ihe ngwọta, nanị ihe ngwọta kacha nso anyị chọtara bụ na mgbatị ahụ, ebe o kwuru na ọ bụ diski na-apụ apụ ma ọ bụrụ na ọ na-agakarị n'ike. N'elu, wdg. Na m ghọtara na mmega ahụ bụ ihe ngwọta. Anyị anwalela akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ, ma kwenye ma ọ bụ na anyị ekwetaghị, m na-afụ ya azụ n'azụ kwa ụbọchị iji mee ka nrụgide ahụ kwụsị ka ọ nwee ike ihi ụra n'abalị ma ọ bụ na-agafe ụbọchị .. Ihe kacha njọ bụ mgbe ọ ga-amalite. gbagoro na bọọlụ aka ọzọ, ọ kwụsịrị n'abalị na-ehi ụra na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na dọkịta. Kedu ihe ị chere na ọ nwere ike ịbụ? Kedu ihe m nwere ike ịjụ onye chiropractor? Nke a ọ ga-achọ chiropractor mgbe niile kwa izu? Ọ nwere usoro akọwapụtara nke m nwere ike ime iji dozie nke a n'onwe m?
Nke mbụ, m gaara enwe nyocha MRI nke spine lumbosacral (azụ azụ, sacrum na pelvis) - ebe a ị ga-enwe ike ịchọpụta ma ọ bụ mmerụ ahụ diski ma ọ bụ nkwụsị diski. Ma n'inwe ihe mgbu dị ogologo na nke siri ike, echere m na e meela nyocha dị otú ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka o gosiri?
Melita ekwu, sị:
Nnọọ. Na-eche ma ọ bụrụ na s-shaped scoliosis right-convex torocally na ekpe-convex lumbar nwere ike ime ka ọrịa ogbu na nkwonkwo na-agbanwe na nkwonkwo IS?
Helleland ekwu, sị:
Ndo… I mean: enwere ebe nrụọrụ weebụ ị ga-akwado ebe a na-egosi mmega ahụ dị mma 2 1/2 ọnwa mgbe c5 / 6 prolapse na olu nke ugbu a anaghị enye nsonaazụ akwara ozi na ogwe aka nri ọzọ mana nke na-eme ka m nwee nkụchi. / ntakịrị mmalite na-ewute oke ibu? Enwere m ike ịtụgharị olu m nke ọma site n'akụkụ gaa n'akụkụ na gburugburu (mana ọ na-afụ ụfụ ugbu a mgbe m na-atụgharị azụ azụ). Ọkachamara physiotherapist agwala ya na mmega ahụ ike bụ fy ugbu a, ọkachasị ibuli elu, nakwa pushups (ma amaghị ma ọ na-emetụta ụdịdị niile). Obere ozi ịntanetị gbasara ihe adịghị mma ịme. Enweghi mgbidi ribbed n'ụlọ, ga-azụta ọzụzụ na-agbanwe. Nke a bụ ntakịrị ihe, ị maara, mana maka m ọ dị mkpa ka ị ghara ịbanye n'ụlọ ọgwụ ọzọ - ma mee ihe ga-ekwe omume / kwere ka ị ghara ida ike niile na ogwe aka gị. Ewezuga ibuli ibu na barbell (a na-anabata dumbbells dị ọkụ na mmega ahụ ekwere). Ebee ka m nwere ike ịchọta ozi ịntanetị gbasara ihe dị mma na ihe dị ize ndụ n'ọnọdụ m?
Dagfinn ekwu, sị:
Na-ezo aka na vidiyo mara mma nwere mmega ahụ megide sciatica (https://www.vondt.net/5-gode-ovelser-mot-isjias/).
N'ime ngalaba nkọwa ị ga-ahụ posts ndị a:
Mmega ahụ dị mma akọwara ebe a, ewezuga ebuli azụ ịgha ụgha ma ọ bụ "The Cobra". Ihe omume a na-ehulata azụ n'ụzọ nke na-adịghị mma maka ndị na-alụ ọgụ sciatica, ma si otú a mee ka nsogbu ahụ dịkwuo njọ karịa ka ọ dị na mbụ. "
Ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ ka ebisara ozi a, ọ bụ oge ịza azịza?
Nicolay v / Vondt.net ekwu, sị:
Ee, eleghị anya ị kwuziri. Ihulata azụ ka a na-akpọ ndọtị, a na-ejikwa ndọtị kwụ ọtọ na usoro McKenzie maka sciatica na mgbu azụ. Gụkwuo maka ya na ọmụmụ ihe ebe a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539720/
Sciatica nwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya, gụnyere mwepu ma ọ bụ stenosis spinal. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ihe ndị a nwere ike ịkpasu gị iwe site n'ịgha ụgha, mana na ọtụtụ mmadụ nwere ike nweta ahụ efe. Ọ dabere na ihe kpatara na ike nke mgbu sciatica.
Na-achọ gị ọmarịcha mgbede n'ihu!
Chọrọ isonye na mkparịta ụka a?
Nwere onwe gị ịnye onyinye!
Hapụ ikwu Kagbuo azịza
Agaghị ebipụta adreesị ozi-e gị. Akara mmanye amanyere mpaghara *
Chekwaa aha m, email na webụsaịtị na ihe nchọgharị a maka oge ọzọ m na-ekwu.
Vondt.net bụ saịtị ahụike maka Vondt Clinics na nkwarụ musculoskeletal nke ndị ọkachamara ahụike nyere ikike na-arụ.
Undlọọgwụ Wound bụ ụlọ ọrụ aka ọrụ, nwere ihe karịrị 60000 na-eso ụzọ, nke ụlọọgwụ nwere amamịghe n'ọrịa. Can nwere ike ịchọta otu ụlọọgwụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọgwụ a tụrụ aro dị gị nso n'okpuru njikọ "FIND A CLINIC".
You chọrọ nyocha na enyemaka na mgbu gị? Pịa ya ịhụ ụlọ ọrụ mmekọ anyị na ndị mmekọ anyị.
Ige Họrọ udi Usoro ọgwụgwọ ọzọ Annet Osteoarthritis (Osteoarthritis) Autoimmune sirop ọgwụgwọ English ergonomics Fibromyalgia research ụkwụ physiotherapy General guest Post nkwojiaka Mkpuchi ahụike Obi na ọrịa vaskụla Head Hip Ọnọdụ anụ ahụ chiropractic ikpere Nri na nri Mmeju Ahụ mgbu Ike ike nwa / ME quality Articles Reader Ajụjụ na nkà mmụta ọgwụ Akwara na Skeleton olu akwara ọrịa Mmega Ahụ na Mmega Ahụ rheumatism Azu ọrịa ike omume Dizzness na Ọrịa Crystal Ọrịa na Ọrịa ndinyanade mbịne omume ọzụzụ Uncategorized Ike ike na ume
© nwebisiinka - Vondt.net